09/04/13 ~ Myanmar News Updates
11:55:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
“ရယ်ခြင်းသည် ဆေးတစ်ပါး” ဟု သုံးနှုန်းလေ့ ရှိကြသည်။ တူရကီ ဆရာဝန် များသည် တေးဂီတကို ဆေးတစ်ပါးအဖြစ် အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုကြောင့် “တေးဂီတသည် ဆေးတစ်ပါး” ဟု ခေါ်ရပေတော့မည်။ ယနေ့ အချိန်တွင် တူရကီနိုင်ငံ၌သာမက နိုင်ငံများစွာတွင် ရောဂါဝေဒနာများ ကုသရာ၌ တေးဂီတကုထုံး Music Therapy ကို အသုံးပြုလာကြပြီ ဖြစ်သည်။
တူရကီဆေးရုံမှ ဆရာဝန်များက "Islamic Music Therapy” မှာ ရာစုပေါင်း များစွာက ရှိခဲ့သော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရောဂါဝေဒနာများကို ကုသ ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ The Memorial Hospital in Istanbul မှ Dr Bingur Sonmez နှင့် Dr Erol Can တို့က တေးဂီတကုထုံးသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်များကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး ရောဂါဝေဒနာများ ကုသရာတွင် တွဲဖက်ကုထုံးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။ ရောဂါဝေဒနာ အမျိုးအစားလိုက် တေးဂီတ အမျိုးအစားကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု သိရသည်။
စိတ်ကို လှုပ်ရှားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သော တေးဂီတများ ရှိသကဲ့သို့ စိတ်တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု ရစေနိုင်သော တေးဂီတများလည်း ရှိသည်။ တေးဂီတ၏ စွမ်းအားကို ရောဂါဝေဒနာ ကုသရာ၌ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးစွဲလာကြဖွယ်ရာ ရှိသည်။
11:47:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
“ဘာ … ဘာရယ် … ပြန်ပြောစမ်းပါအုံး …"
“ဟုတ်တယ်ဆရာ … ကုတင်နံပါတ်(၃)က မွေးလူနာက ကလေးကို ထားခဲ့ပြီး လစ်ပြေးသွားပြီ"
သူနာပြုဆရာမ မနီ၏စကားကို ထပ်မံကြားလိုက်ရချိန်တွင် ဒေါက်တာပြည့်စုံ မျက်လုံးပြူး ပါးစပ်အဟောင်း သား ဖြစ်သွားရပြန်သည်။ ထို့နောက် ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ပြန်ထိုင်လိုက်ပြီး သက်ပြင်းရှည်ချကာ
“ဟာဗျာ … ခက်တာပဲ၊ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ … “ဟု ယောင်ယမ်းစွာ လွှတ်ခနဲ ပြောလိုက်မိချေသည်။ ဆရာမ မနီက သူ၏လက်အောက်ဝန်ထမ်း။ သူ ဆရာမရှေ့တွင် ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင် မျက်စိမျက်နှာ ပျက်ယွင်းနေသော်လည်း မတတ်နိုင်ပေ။ ထိုကိစ္စအတွက် ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမည်မှန်း စဉ်းစားမရအောင် ဖြစ်နေရသည်။
“ကျွန်မတို့လည်း … သူပေးထားတဲ့ လိပ်စာအတိုင်း လိုက်စုံစမ်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လိပ်စာက အမှားကြီး"
“ကျွန်မတို့အခန်းထဲမှာ …. ၀၀ကစ်ကစ်နဲ့ယောက်ျားလေး … ပြီးတော့ ချစ်စရာလေး၊ အခု ကလေးက နို့ဆာလို့ထင်တယ် ငိုနေတယ် …"
ဆရာမ မနီ၏စကားအဆုံးတွင် သူ သက်ပြင်းရှည်ကြီး လေးပင်စွာ ချမိသည်။ လွန်ခဲ့သော လေးရက် က မွေးလူနာဗိုက်ကြီးသည် တစ်ယောက် သူတို့ တောင်ညောင်ဦးတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဗိုက်မှာ နာကျင်သော ဝေဒနာကြောင့် လူးလဲစွာ ခံစားရင်း ရုန်းရင်းဆန်ခတ် အော်ဟစ်နေ သည်။ မွေးလမ်းကြောင်းနှင့် ဗိုက်ကို သေချာစမ်းကြည့်လိုက်တော့ မကြာမီ မွေးဖွားပေတော့မည်။ ထို့ကြောင့် မွေးခန်းထဲ ချက်ချင်းထည့်ကာ ကလေးကို ရှောရှောရှူရှူ မွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မီးမဖွားခင် တွင်အလုပ်ရှုပ်နေသောကြောင့် မွေးဖွားပြီးမှာသာ ဆေးရုံတက်မှတ်တမ်းတွင် ရေးမှတ်ရလေသည်။ ခင်ပွန်းနာမည်ဆိုတော့ ခင်ပွန်းမရှိဟု ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောပြီး ကလေးကို နို့တိုက်ကာ မှိန်းနေလေသည်။ မမှိန်းနိုင်တာက သူတို့ဖြစ်ရလေသည်။ သူနှင့် ဆေးရုံဝန်ထမ်းအားလုံး အလုပ်ရှုပ်သွားရကာ မွေးလူနာ လာပို့သွားသော လူများကို ပြန်ခေါ်ခဲ့ရလေသည်။ ထိုလူများ ချက်ချင်း လိုက်လာကြပြီး …
“ကျွန်မတို့လည်း ဒီကလေးမကို တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးပါဘူး၊သိဘို့ဆိုတာ ဝေးပါသေးတယ်၊ ဒီနေ့ ကျွန်မတို့ ထမင်းဆိုင်ကို သူတစ်ယောက်တည်း ထမင်းလာစားတယ်၊မပေါ့မပါးကြီးနဲ့ဆိုတော့ သတိထားမိတယ်၊ အဲ ခဏနေတော့ ဗိုက်နာတယ်လို့ပြောတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ဒီကလေးမ မျက်နှာမြင်ချင်တာပဲနေမှာဆိုပြီး ဒီဆေးရုံ ကို ခေါ်လာခဲ့တာပါ"
ရှိစေတော့ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ ထိုမွေးလူနာအား လိုအပ်သောဆေးမှအစ အစားအသောက်ကိုပါ ဆေးရုံမှ တာဝန်ယူပေးရလေသည်။ ဟော … အခုတော့ ထိုအမျိုးသမီးက ကလေးငယ်ကို စွန့်ပစ်ပြီး ထွက်ပြေး သွားပြီဆိုပါလား …
“ကဲ … ဆရာမ ကလေးကို ကျွန်တော် လိုက်ကြည့်မယ်"
သူနှင့် ဆရာမ ကလေးရှိရာအခန်းထဲသို့ လျှောက်လာခဲ့ကြသည်။ တံခါးကို ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ပိတ်ဖြူဖြင့် ထွေးထားသော ကလေးနီတာရဲလေးက လှုပ်ရှားကန်လန်ကျောက်နေလေသည်။ စူးစူးဝါးဝါး ငိုယိုနေသော ကလေးငယ်လေးကို ကြည့်ရင်း သူ့စိတ်ထဲတွင် နင့်ခနဲ ခံစားလိုက်ရသည်။ လောကကြီး အကြောင်းမသိနားမလည် မိခင်က စွန့်ပစ်သွားသော အပြစ်မရှိ တစ်ကောင်ကြွက် ကလေးလေးနှယ်။ ဖခင်ဆိုတာမရှိ။ ဆွေးရိပ်မျိုးရိပ်ဆိုတာ ဝေးစွ။ သူ စိတ်မသက်သာစွာနှင့် သက်ပြင်းရှည်ချမိသည်။
“ဆရာမ … ကလေးအတွက် နို့မှုန့် နဲ့လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ပေးလိုက်ပါ"
“ဟို … ဆရာ … ဟို ဘယ်ပိုက်ဆံနဲ့ …"
ဆရာမ မနီက စကားတစ်ပိုင်းတစ်စနှင့် ရပ်တန့်သွားကာ သူ့အား အကဲခတ်ကြည့်နေသည်။ ဆေးရုံရန်ပုံငွေ အလုံအလောက်မရှိသော တိုက်နယ်ဆေးရုံလေးမှာ မည်သည့်ပိုက်ဆံနှင့် ၀ယ်ရမည်နည်း။ ဆရာမ၏စကား က သဘာဝကျသဖြင့် သူ ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်ကာ …
“ဆရာမ … ခဏနေရင် ကျွန်တော့်အခန်းထဲကို လာခဲ့ပါ"
ဟု ပြောပြီးပြီးချင်း သူ့အခန်းထဲသို့ ၀င်လာခဲ့သည်။ ကုလားထိုင်တွင် အချိန်မည်မျှကြာအောင် ထိုင်နေမိ သည်မသိ။ ဆရာမ၀င်လာမှ အတွေးစတို့ ပြတ်တောက်သွားရကာ …
“ကဲ … ဆရာမ လိုအပ်တာ အကုန်ဝယ်ပေးလိုက်၊ ရော့ … ဒါ ကျွန်တော့်လစာလေးတွေ စုထားတဲ့ပိုက်ဆံ"
ဆရာမရှေ့သို့ ပိုက်ဆံထပ်ကို ချပေးလိုက်သည်။ ဆရာမက သူ့အားမျက်လုံးအ၀ိုင်းသားနှင့် ကြည့်နေရင်း …
“ပြောပါ … ဆရာမ၊ နည်းသေးလို့လား … ကျွန်တော့်မှာလည်း အဲဒါပဲရှိတယ် …"
“အို … မဟုတ်ပါဘူးဆရာ … ဟို … ကလေးကို မိဘမဲ့ကလေးများကျောင်းကို ပို့လိုက်ရမလား …"
ဆရာမ၏ မ၀ံ့မရဲစကားကြောင့် သူတွေဝေသွားရသည်။ ကလေးက အခုမှ လေးရက်သားပဲ ရှိသေးသည်။ မိခင်ရင်ခွင်ထဲမှာ နွေးနွေးထွေးထွေးထားရှိရမည့် နုနယ်သောအရွယ်လေးတွင် ရောဂါပေါင်းစုံ ၀င်လာ နိုင်သည်။ ခိုကိုးရာမဲ့ ကလေးငယ်အတွက် ဆေးရုံသည်သာ အသင့်တော်ဆုံး နေရာဖြစ်သည်။
“မပို့နဲ့အုံး ဆရာမ … သူ့မိခင် ပြန်လာခေါ်ရင် ခေါ်လိမ့်မယ် …"
“ပြန်မခေါ်လောက်ဘူးထင်တယ် ဆရာ …"
ဟု ဆရာမ၏ချက်ချင်းတုံ့ပြန်စကားကြောင့် သူမျက်မှောင်ကျုံ့သွားရကာ …
“ဆရာမက ဘာအကြောင်းပြချက်ကြောင့် အဲဒီလို ပြောနိုင်ရတာလဲ"
“ဒီလိုပါဆရာ … ဟိုတစ်နေ့က ကျွန်မက သူ့ခင်ပွန်းအကြောင်း မေးပါတယ်ဆရာ၊ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့မျက်နှာ က သိသိသာသာ ပျက်နေတယ်၊ နောက်မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောပါတယ်၊ သူက စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင် မှာ သီချင်းဆိုပါတယ်တဲ့၊ သူသီချင်းဆိုရင် အမြဲအားပေးတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ အဲဒီလူက ညတိုင်းလိုလို လာပြီး ပန်းကုံးတွေ အမြဲစွပ်တယ်၊ နောက် ရင်းနှီးပြီး …"
အပျိုကြီးဆရာမမှာ စကားမဆက်နိုင်ဘဲ ခေါင်းငုံ့ထားလေသည်။ ရှက်ရွံ့မှုကြောင့် ပါးမို့မို့လေးနှစ်ဘက်မှာ ရဲတက်လာသည်။
“ထားပါတော့ သူတို့အချင်းချင်း အဆင်ပြေသွားကြတယ်ဆိုပါတော့ …"
“ဟုတ်တယ်ဆရာ … အဲဒီလူက လက်ထပ်ယူမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့၊ အဲဒါနဲ့ သူလည်း တားဆေးတွေ မထိုး မသောက်ဘူးတဲ့၊ သူလည်း ကိုယ်ဝန်ရှိရော အဲဒီလူက ပေါ်မလာတော့ဘူး၊ စားသောက်ဆိုင်ကလည်း နာမည်ပျက်တယ်ဆိုပြီး အလုပ်ထုတ်လိုက်တယ်တဲ့ …"
သြော် … တစ်လုံးတည်းက လွဲပြီး သူဘာမျှမပြောနိုင်။ စားဝတ်နေရေးကြောင့် အမျိုးကောင်းသမီးပျိုလေး များ စားသောက်ဆိုင်မှာ သီချင်းဆို။ ငွေရရင် ဘာမဆိုလုပ်မည်ဆိုသည့် ပိုင်ရှင်များ၏လောဘကြားဝယ် ဓားစားခံဖြစ်။ ငွေကို ရေလိုဖြုန်းနိုင်သည့် တဏှာဘီလူးကြီးများက ငွေနှင့်မက်လုံးပေး။ မိန်းကလေးများ က ငွေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ပင်လယ်ထဲမှာ မဆင်မခြင် လက်ပစ်ကူးခတ်။ ရေနစ်မည်ဆိုတာ မစဉ်းစား မိ။ နောက်ဆုံး ဒုက္ခပင်လယ်ထဲမှာစုံးစုံးနစ်မြုပ်ကြရသည့် ဇာတ်လမ်းများက မရိုးနိုင်။
“နောက်ပြီးဆရာ … သူနာမည်ကို ပန်းနုဝေလို့ လူနာမှတ်တမ်းမှာ ပေးထားပေမယ့် ကျွန်မဆေးထိုးတော့ သူ့လက်မောင်းမှာ စန်းစန်းအေးလို့ တက်တူးထိုးထားတာ တွေ့တယ်ဆရာ …"
ဒါကတော့ သိပ်တော့မဆန်း။ ရွာမှာတုန်းက မိဘများပေးခဲ့သည်က စန်းစန်းအေး။ စားသောက် ဆိုင်ရောက်တော့ ပန်းနုဝေဟု အမည်ပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
“နောက်ပြီး … အဖွားကြီးတစ်ယောက်ဆီမှာ ဗိုက်ဖျက်ချဖူးသေးတယ်တဲ့၊ မပျက်ကျဘဲ အခုလို ကလေးမွေးလာတာတဲ့ …"
“ကဲ ကဲ … ဆရာမ ကလေးအတွက် နောက်မှပဲ တစ်မျိုးကြည့်စီစဉ်ကြတာပေါ့၊ အခုတော့ လိုအပ်တာတွေ ၀ယ်ပေးလိုက်ပါ"
ဆရာမ အခန်းထဲမှ ထွက်သွားချိန်ထိ သူ ငေးငိုင်နေမိသည်။ လူ့လောကအကြောင်း ဘာမျှမသိရှာ ပဲ ရောက်လာခဲ့သော အပြစ်မရှိ ကလေးငယ်လေး။ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းကိုလည်း မပို့ချင်သေး။ အပျိုကြီး ဆရာမ မနီကလည်း ထိုကလေးကို မွေးစားချင်သည့်ပုံမပေါ်။ အလုပ်သမားများ၏ လက်ထဲကိုလည်း ကလေး၏နောက်ရေး စိတ်မအေးရသဖြင့် မပေးပစ်နိုင်။ ထိုကလေးငယ်သည် နောင်တစ်ချိန်မှာ နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးပါသည့် လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ သူ တွေးရင်း သက်ပြင်းကိုသာ အခါခါ ချနေရလေသည်။
“ဟော … ဆရာမ မနီ .. လာ … လာ ဘာတွေ ထူးခြားသေးလဲ"
“ဘာမှတော့ ထူးထူးထွေထွေ မရှိပါဘူးဆရာ … မွေးလူနာ မမြမှုံက ဒီနေ့ဆင်းခွင့်ပေးရတော့မှာလေ … အဲဒါ ဆေးရုံဆင်းခွင့်စာအုပ်မှာ ဆရာလက်မှတ်ထိုးပေးဘို့ပါ …"
“သြော် … အေးအေး သူက ခွဲမွေးထားတာပဲ၊ နေအုံး ကျွန်တော် တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အုံးမယ် …"
“အဲဒါထက် အရေးကြီးတာ ရှိသေးတယ်ဆရာ … ဟို ကလေးလေးကို လိုက်ကြည့်ပေးပါအုံး …"
“ဟုတ်သားပဲ … မေ့နေလိုက်တာ … ဘာဖြစ်လို့လဲ …"
ထိုကလေးငယ်ကို လိုက်ကြည့်ပေးလိုက်သည်။ ကလေးငယ်မှာ တစ်ကိုယ်လုံး ပူနွေးနေသဖြင့် အနှီး ကို မြန်မြန်ဖယ်ရှားကာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးလိုက်သည်။ ကလေးငယ်၏ချက်မှာ ရဲနေပြီး ပြည်နည်းနည်း စို့ နေလေသည်။ အနံ့အသက်ကလည်း သိပ်မကောင်းလှ။
“ကလေးရဲ့ချက်က ပိုးဝင်နေတာပဲ၊ ဆရာမ ကလေးကို ဆေးထိုးပေးလိုက်ပါ"
“၁၀ ရက်တောင် ရှိပြီနော်၊ ကလေးအမေလည်း အခုချိန်ထိ ပေါ်မလာတော့ဘူး၊ လာမခေါ် ရင်တော့ ဆေးရုံကပဲ မွေးစားရတော့မှာပဲ၊ ဆရာကလည်း မိဘမဲ့ကျောင်းကို မပို့ချင်ဘူးမဟုတ်လား"
ဆရာမက ကလေးငယ်၏အကြောထဲ အပ်ထိုးနေရင်းဆိုလေသည်။ ကလေးငယ်မှာ အပ်ထိုးလိုက်ခြင်းကြောင့် နာကျင်လွန်းသဖြင့် ခပ်သဲ့သဲ့လေး ငိုညည်းနေရှာသည်။ သူ့ရင်ထဲတွင်လည်း ဆို့နစ်ကြေကွဲသွားရလေသည်။ ကလေးငယ်၏ဘ၀သည် သူ့ဘ၀ကို ပုံတူကူးထားသော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် လိုပါပဲလား …
ဒေါက်တာပြည့်စုံကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်က သူ့အဖေ သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ အဖေဆိုတာ ဘယ်လိုအရာမျိုး လည်း သူမသိခဲ့။ မိခင်မုဆိုးမကြီးမှာ ဘ၀ကို အရှုံးမပေးဘဲ ဈေးတောင်းခေါင်းပေါ်ရွက်ကာ သူ ဆေးကျောင်းရောက်အောင် ကျောင်းထားပေးခဲ့သည်။ ကံတရား၏လှံဖျားက မျက်နှာသာမပေးဘဲ ထိုးနှက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြန်သည်။ သူဆေးကျောင်းတက်သည့်နှစ်မှာပဲ မိခင်က ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြန်သည်။ ခိုကိုး ရာမဲ့ ဆွေမရှိ မျိုးမရှိ တစ်ကောင်ကြွက်ဘ၀တွင် ရွာမှထောက်ပံ့ပေးခဲ့သဖြင့် ဆရာဝန်ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။ ဘ၀ဇာတ်ခုံပေါ်တွင် ငိုချင်းချည်းသာ ကခဲ့ရသော သူ့နှလုံးသားထဲတွင် ဘ၀တူကလေးငယ်အတွက် အကြင်နာတရားတို့ ကိန်းဝပ်နေသည်မှာ အဆန်းတကျယ်တော့ မဟုတ်။
“ဆရာ … ကလေးလေးတစ်လပြည့်ပြီနော် … ကလေးကို မွေးစားမယ့် သူဌေးတစ်ယောက်လောက် ပေါ် လာရင်ကောင်းမှာ …"
“မကောင်းဘူး … ကလေးကို ကျွန်တော်မွေးစားမှာ"
ဟု လွှတ်ခနဲ ပြောမိသွားသည်။ သူ့စကားသူပင် မယုံနိုင်လောက်အောင် အံ့သြမိလေသည်။ ဆရာမက လည်း သူ့အား မျက်လုံးအ၀ိုင်းသားနှင့် ကြောင်ကြည့်နေလေသည်။
“ဆရာရယ် … ဆရာက တစ်ယောက်တည်းသမားဆိုတော့ ဖြစ်ပါ့မလား …"
သူ ဖြည်းဖြည်းချင်း ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည်။ ထို့သို့ဖြင့် လုံးဝမျှောင်လင့်မထားသော သံယောဇဉ် အမျှင်လေးသည် သူ့ဘ၀ထဲသို့ လာရောက်ရစ်ပတ်တွယ်မိလေသည်။
“ဆရာ … ဒီမှာ ဆရာ့အတွက် စာတဲ့၊ ဆေးရုံပေါက်မှာ စာပို့သမားတစ်ယောက်လာပို့သွားလို့ ကျွန်မ ယူလာတာ … ပေးပေး ကျွန်မကို ကလေးပေး … “
အလုပ်သမား ဒေါ်စိန်ဆီမှ စာကိုလှမ်းယူရင်း ကလေးကို ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် နို့ဘူးကို စားပွဲပေါ်တင် ကာ စာအိတ်ပေါ်မှ လက်ရေးကို ကြည့်လိုက်သည်။ သူ အကျွမ်းတ၀င်ရှိလှသော ချစ်သူလက်ရေး … စိတ်လှုပ်ရှားစွာနှင့် စာအိတ်ကို မြန်မြန်ဖွင့် ဖတ်လိုက်သည်။
ဝေ သတိရခြင်း များစွာဖြင့် စာရေးလိုက်ပါတယ် … ဝေ ဆေးပညာ ဘွဲ့လွန်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအောင်တယ် … ဝေ အရမ်းပျော်နေတယ် … ကိုပြည့်လည်း ပျော်နေမယ်မဟုတ်လား … အခု မန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာ ဘွဲ့လွန်တက်ရတော့မှာ … ကိုပြည့်နဲ့ဝေပျော်ခဲ့တဲ့ နေရာလေးတွေကို ပြန်ရောက်အုံးမှာပေါ့ … အလွမ်းပြေသွားလိုက်အုံးမယ် … ကိုပြည့်က အခု ကလေးတစ်ယောက်ကို မွေးစားလိုက်တယ်ဆို … အဲဒါတော့ ဝေ သဘောမကျဘူး … ဝေ မိဘတွေကလည်း သဘောကျမှာမဟုတ်ဘူး… ဝေ့မှာ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိပါတယ် … ဒါပေမယ့် ကိုပြည့်ရယ် … ကိုပြည့်နဲ့ဝေတို့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် ခရီးလမ်းမှာ ဒီကလေးက အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင် တယ်ဆိုတာ ကိုပြည့်မစဉ်းစားမိဘူးလား … အစကတည်းက ကိုပြည့်နဲ့ဝေကို ဝေ့မိဘတွေက သဘောမတူ ပါဘူးဆို အခု ကလေးတစ်ယောက်ကို မွေးစားလိုက်ပြီဆိုတော့ မေမေကို ဘယ်လိုပြောရမယ်မှန်းမသိတော့ ဘူး … ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီကလေးကို နောက်မွေးစားမယ့် လူလက်ထဲကို ပေးလိုက်ပါလား … ဒါပဲနော် …
ကိုပြည့်ကို အသက်မက ချစ်တဲ့ဝေ
စာဖတ်ပြီးချိန်တွင် သူခေါင်းငိုက်စိုက်ကျသွားရသည်။ သူသိပ်ချစ်ရသော ချစ်သူလေး။ သူဆေးကျောင်းသား ဘ၀တွင် ရည်းစားဆိုလို့ ဝေတစ်ယောက်ကိုသာ ထားခဲ့ဖူးသည်။ ပြည့်စုံဆိုသော နာမည်မှလွဲ၍ ဘာမှမပြည့် စုံသော သူ့ဘ၀နှင့် ရွှေပုံပေါ်က မင်းသမီးလေး ဝေ့ဘ၀ကို တစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင် ဘ၀ဇာတ်ဆရာက ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ အခုတော့ …
ချစ်သူနှင့် အပြစ်မဲ့သားငယ်လေးတို့၏ လွန်ဆွဲပွဲတွင် သူသည် မည်သည့်ဘက်တွင် ရပ်တည်ရမည်နည်း။ အသက်မက ချစ်ပါတယ်ဆိုသည့် ဝေ့ကိုပဲ တစ်သက်တာ လက်တွဲသွားရမည်လား … စွန့်ပစ်ခံသား ငယ်လေးကို ဘ၀နှင့်ရင်းပြီး ထွေးပွေ့ရမည်လား … သားငယ်လေး၏စူးစူးဝါးဝါးငိုသံကြောင့် သူ့အတွေးစ တို့ ပြတ်တောက်သွားရကာ …
“ဒေါ်စိန် … သားလေး ဘာဖြစ်လို့လဲ … " ဟု ကပျာကယာ လှမ်းမေးလိုက်သည်။
“ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးဆရာ … အလေးတွေ သွားနေလို့ ငိုတာပါ … “ဟု ဒေါ်စိန်ကလှမ်းပြောမှ သူမှာ စိတ်အေး သွားရကာ သက်ပြင်းချနိုင်လေသည်။
တရေးရေးသတိရ၍ တစိမ့်စိမ့် လွမ်းဆွတ်ပြီး တနွေးနွေးချစ်နေရုံမှလွဲ၍ ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါ လား ဝေရယ် …
ခြေဖနောင့် အသားမာတက်ခြင်း အတွက် သဘာဝကုထုံး
9:34:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ခြေဖနောင့် အရေပြား ခြောက်သွေ့ပြီး အသားမာတက်နေတဲ့အခါ အိမ်မှာပဲ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။ သကြားသကြားခွက်ရဲ့ လေးပုံသုံးပုံကို စန္ဒကူး၊ ပူရှိန်း စတဲ့ အဆီတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ရောမွှေပြီး ခြေဖနောင့် အသားမာနေရာပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းပြီး ညင်ညင်သာသာ ကြေးချွတ်ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ချောမွေ့နူးညံ့တဲ့ အရေပြားဖြစ်အောင် ပွတ်တိုက်ပြီးမှ သန့်စင်ပေးပါ။
နာနတ်သီးကို အခွံနွှာပြီး ခြေဖနောင့် အသားမာ နေရာတွေပေါ် သုတ်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ နာနတ်သီးထဲမှာ ပါတဲ့ အင်ဇိုင်းနဲ့ အက်စစ်ဓာတ်ဟာ ခြေဖနောင့်အသားမာကို ကင်းစင်စေပါတယ်။
ခြေဖနောင့်အသားမာမှာ အုန်းဆီ၊ သံလွင်ဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ ကြက်ဆူဆီ အစရှိတဲ့ ဆီတစ်မျိုးမျိုးကို လိမ်းပေးရင်လည်း အသားမာ ကင်းစင်စေပါတယ်။
၂၀၀၅၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဖူးငုံ ဆယ်ကျော်သက် မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆောင်းပါးရှင် ၀င်းကိုကို
ကျနော့်အနေနဲ့က ဗေဒင်ဆို စိတ်ချမ်းသာအောင် ဟောတဲ့ ဗေဒင်ပဲ ယုံပါတယ်။
ဒီဟာလေးကို ကျနော့် မွေးနေ့နဲ့ စမ်းကြည့်တာ မှန်သလိုလို ဖြစ်နေလို့
အားလုံးကိုလည်း share လုပ်လိုက်တာပါ။
ဖူးငုံ ဆယ်ကျော်သက် စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ အတွက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှ
ဗေဒင်ဟောပြောမှု ပုံစံများကို တင်ဆက်ပေးနေရာ၊ ဒီလမှာတော့ မွေးနေ့အလိုက်
တိရစ္ဆာန် အကောင်များနဲ့ တင်စားပြီး အမူအကျင့် ဘယ်လိုရှိတယ် ဆိုတာ
"We Can't Stop" သီချင်းလေးနဲ့တူ အင်္ဂလိပ်စာလေံလာနိုင်အောင်
လရောင်မျှားသော နွေညများ (နွေလ)
8:33:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ညသည် အတော်လေးကို လှပလွန်းနေ၏။
ဘယ်လိုကို လှပနေမှန်းမသိ။ လရောင်ဖြင့် ကဗျာဆန်နေလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ ကောင်းကင်တလင်းပြင်တွင် လည်း ညိုမှောင်သော တိမ်လိပ်တိမ်စိုင်များ ကင်းစင်နေသည်။ အနက်ရောင် ကတ္တီပါစပေါ်တွင် ဒင်္ဂါးပြားကြီးတစ်ခုနှင့် စိန်မှုန်စိန်ပွင့်ကလေးတွေ ကြဲပက်ထားသည့်နှယ် ကောင်းကင်သည် ဝင်းဝါထိန် ပနေသော ရွှေရောင်လမင်းကြီး ၊ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် ဝင်းလဲ့နေသော ကြယ်တာရာတို့နှင့် လှချင်တိုင်း လှနေပေသည်။
သည်လိုညမျိုးတွေကို ကျွန်တော် ချစ်၏။ သည်လိုညမျိုးတွေမှာ ပြတင်းပေါက်အနား ထိုင်ပြီး ကောင်းကင် ကြီးကို တခုတ်တရ ငေးကြည့်နေရသည့်အရသာကို ကျွန်တော် အထူးပင်နှစ်သက်မိသည်။ ကြုံကြိုက် ၍ ငေးကြည့်ခွင့်ရသည့်အခါတိုင်း ညဉ့်နက်သွားသည့်တိုင်အောင် ကျွန်တော် မအိပ်ခဲ့။ သည်လိုညလေး ကုန်ဆုံးသွားမှာကိုပင် စိုးကြောက်မိကာ မအိပ်ချင်သရွေ့တော့ ကောင်းကင်ကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ တစ်ခါတလေ ကောင်းကင်ကို ငေးကြည့်ရင်း အတွေးအာရုံတွေရကာ သီချင်းတစ်ပုဒ် ရေးစပ်ပြီးဆုံးလိုက် သည်များလည်း သည်လိုညမျိုးတွေမှာ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ထိုကြောင့် အနုပညာသည်ပီပီ သည်လိုညမျိုးတွေကို ကျွန်တော် ချစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်လို နေရာမျိုးမှာတော့ သည်လိုလှပလွန်းသည့် လပြည့်ညတွေကို ရံဖန်ရံခါမှပင် ကြုံရတတ်ပါသည်။ သို့သော် ကြုံခဲလှ၏။ မြို့ကြီးပြကြီးဆိုသည့်ဂုဏ်ပုဒ်အောက်မှာ လသည် သာချင်တိုင်း သာခွင့်မရခဲ့ပေ။ မျက်စိစူးအောင် လင်းလွန်းလှသော နီယွန်ယွန်မီးသီးတွေသည် လ၏အလင်းရောင်ကို တိမ်မြုပ်စေခဲ့ပြီ။
အခုတောင် သီချင်းဆိုဖို့ကိစ္စနှင့် နယ်မြို့လေးတစ်မြို့ကို ရောက်နေသောကြောင့်သာ။ သည်မြို့လေး မှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော ကထိန်ပွဲတော်အတွက် ကျွန်တော်နှင့်အတူ နာမည်ကြီးအဆိုတော် (၆)ယောက် လာရောက်သီဆိုဖျော်ဖြေပေးကြခြင်း ဖြစ်သည်။ နို့မို့သာဆို သည်လိုညမျိုး သည်လိုအလှမျိုးကို ကြုံကြိုက်ဖို့ရာ မလွယ်ရေးချ မလွယ်ပေ။ သည်နေ့က ကျွန်တော်တို့ အဆိုတော်တွေ တည်းကြသည့် အိမ်ရှိရာ ရပ်ကွက်၏ မီးပျက်ရက် ဖြစ်နေ၏။ မီးပျက်နေပေမဲ့လည်း ပတ်ဝန်းကျင်သည် ပိတ်ပိတ် ပိန်းအောင် မှောင်ကျမသွား … မပြည့်ရုံတမယ် ထိန်ထိန်သာနေသော လ၏အရောင်ကြောင့် အနည်းငယ် လင်းရှင်းနေသည်။
အစကတော့ အိမ်ရှင်ဦးလေးက ဘက်ထရီအိုးဖြင့် မီးထွန်းပေးဖို့ လုပ်သေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ အဆိုတော်တွေက အနုပညာသည်တွေပီပီ သဘာဝအလှကို ခံစားတတ်ပေရာ လရောင်နှင့် လှနေသော ညလေးကို သည်အတိုင်းပဲ ထိုင်ကြည့်ချင်သည်ဟု ဆိုကြသောကြောင့် အိမ်ရှင်ဦးလေးမှာ ဘာမှမစွမ်း သာတော့။ ကျွန်တော်တို့ အဆိုတော်တွေနှင့် အိမ်ရှေ့က မြေကွက်လပ်ကလေးမှာ အတူထိုင်ရင်း ဟိုအကြောင်း သည်အကြောင်းတွေ ပြောကာ မီးပြန်လာမည့်အချိန်ကိုပဲ ထိုင်စောင့်နေခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင် ရေဒီယိုမှ ကျွန်တော်၏ နာမည်ကြီးသီချင်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ ရေဒီယိုကို ဘယ်သူ ဖွင့်လိုက် သည် မသိ။ အသံလာရာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ရေဒီယိုက အိမ်ရှင်ဦးလေးအနားမှာ။ လသာသော ညလေးတစ်ညမှာ ရေဒီယိုလေးတစ်လုံးနှင့် အရာရာသည် ကဗျာဆန်နေသည်ဟု ကျွန်တော် ခံစားမိသည်။
အကုန်လုံး ငြိမ်ပြီး နားထောင်နေကြသည်။
သည်သီချင်းသည် ကျွန်တော့် Masterpiece ဟုဆိုလို့ရပြီး သည်သီချင်းဖြင့် စီးတီးအက်ဖ်အမ် ရွှေ အက်ဖ်အမ် တို့မှ ဆုပေါင်းများစွာ ရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော် အောင်မြင်သော အဆိုတော်တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ ရခြင်းမှာလည်း သည်သီချင်းကြောင့်ဟု ဆိုနိုင်၏။ လွန်ခဲ့သော(၃)နှစ်က နာကျင်ကြေကွဲနေသောနှလုံး သားနှင့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရေးစပ်သီကုံးခဲ့သော သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။
အခုချိန်ထိ သည်သီချင်းကို ဆိုသည့်အခါတိုင်း ကျွန်တော့်အသံတွေ တိမ်ဝင်သွားရစမြဲ ၊ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်း မှာလည်း မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝိုင်းလာရစမြဲ ၊ တစ်ချိန်က ‘ မ ’ ဆိုပြီး ကျွန်တော် မြတ်မြတ်နိုးနိုး ခေါ်ခဲ့ဖူးသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော့်အမြင်အာရုံတွင် မြင်ယောင်မိနေဆဲ။
ကျွန်တော် သည်အကြောင်းတွေကို ပြန်မတွေးချင်ပါ။ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်အနေနှင့်သာ ကြွင်းကျန်ထားပစ် လိုက်ချင်သည်။ သို့သော် (၃)နှစ်ဆိုသော အချိန်ကာလသည် ကျွန်တော့် အတွက် အကောင်းဆုံး သမားတော် မဖြစ်ခဲ့ပေ။ ယနေ့တိုင် ထိုအကြောင်းတွေသည် ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် ခမ်းနားနေဆဲ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းတွေ တိုက်ဆိုင်တိုင်းလည်း ကျွန်တော့် နှလုံးသားမှာ အခုချိန်ထိ ငိုကြွေးနေရဆဲပင်။
၂ဝဝ၅ ဝန်းကျင်လောက်တုန်းက ကျွန်တော်သည် ဘာဆိုဘာမှ မဟုတ်သေးသော ကောင်လေး တစ်ယောက်သာ ဖြစ်သည်။ အခုလို အောင်မြင်ဖို့ပင်ဝေးစွ ကိုယ်ဖြစ်ချင်သော အိပ်မက်တွေကို စိတ်ကူးယဉ် ရုံသာ တတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ထိုအချိန်တုန်းကတော့ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးစ လူငယ်လေး တစ်ယောက်၏ စိတ်ကူးတွေသည် အကြီးကျယ်ဆုံး ခမ်းနားနေခဲ့တာပဲ ဖြစ်သည်။
ဂစ်တာတီးခတ်ပြီး သီချင်းဆိုရသည့် အလုပ်ကို ကျွန်တော် အရမ်းကို မက်မောတွယ်တာမိသည်။ သီချင်း ဆိုခြင်းသည် ကျွန်တော့်ဝါသနာ ၊ အဆိုတော်ဘဝသည် ကျွန်တော် အရူးမူးဆုံးသော စိတ်ကူးအိပ်မက် ပင်။ ဖြစ်နိုင်သလား မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ကျွန်တော် မသိ။ ဖြစ်ချင်နေသော ဆန္ဒတစ်ခုတည်းဖြင့် ထိုစိတ်ကူးတွေကို ရွက်လွင့်ရင်း ကျွန်တော် နေထိုင်ရာ နယ်မြို့ကလေးကနေ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို အရဲစွန့်ပြီး ချီတက်လာခဲ့လေသည်။
ထိုအချိန်တုန်းက လက်ထဲတွင် ဂစ်တာလေးတစ်လုံးနှင့် ရန်ကုန်သွားမည်ဆိုပြီး အလုပ်လုပ်ကာ မစားရက် မသောက်ရက် စုဆောင်းထားသော ငွေလေးငါးသောင်းကလွဲပြီး ဘာဆိုဘာမှ ပါမလာခဲ့။ အဝတ်တစ်စုံ ကိုယ်တစ်ခုဖြင့်သာ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို လွယ်ပိုးရင်း ဂစ်တာကို မလွှတ်တမ်းကိုင်ကာ ချီတက် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့ မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်နှင့် ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိပေမဲ့ ရန်ကုန်ရောက်ရင် ကိုယ် ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ခွင့်ရလိမ့်မည် ဆိုသော အသိနှင့် အကျေနပ် ကြီး ကျေနပ်နေမိခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်မှာ မိဘတွေ မရှိတော့ပါ။ အဖေက ကျွန်တော် လူမှန်းသိတတ်စကတည်းက ကုန်ကားလိုက်ရင်း ကုန်ကားမှောက်ပြီး ဆုံးပါးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မေမေကတော့ ကျွန်တော် ကိုးတန်းဖြေပြီးသည့်နှစ်မှာပင် လူကြီးရောဂါနှင့် ဆုံးပါးသွားခဲ့လေသည်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမကလည်း မရှိ ၊ တစ်ကောင်ကြွက်သမား ကျွန်တော့်ကို ဆွေမျိုးမကင်းသော ဦးလေးရွှေညိုက ခေါ်ယူမွေးစားခဲ့သည်။ ဦးလေးရွှေညိုက တစ်ကိုယ်တည်းသမား လူပျိုကြီး ၊ ဂစ်တာတီးတတ်အောင်လည်း ဦးလေးရွှေညိုက သင်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တွင် အခြေချဖို့ မခက်ခဲခဲ့သည်မှာလည်း ဦးလေးရွှေညိုကြောင့်ပါပင်။ နေရမည့်နေရာ အလွယ်တကူ ရရှိခဲ့သည်။ ချောင်ကျကျ နေရာလေးတစ်ခုမှာ အခန်းတစ်ခန်းကို ဈေပေါပေါနှင့် ငှားနေနိုင်ခဲ့သည်။ အခန်း ပိုင်ရှင်မှာ ဦးလေးရွှေညို၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မှာက စားရိတ်စားခတွေက ကြီးလေးသည့် အတွက် အလုပ်လုပ်ကိုလုပ်ရမည်ဆိုသော ဦးလေးရွှေညို့စကားကြောင့် အလုပ်အကြောင်း မေးမြန်း စုံစမ်းကြည့်ရာ လမ်းထိပ်က စားသောက်ဆိုင်တွင် စားပွဲထိုးတစ်ယောက် အလိုရှိကြောင်း သိခဲ့ရသည်။
ကျွန်တော် မလုပ်ချင်။ ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုရသည့် နေရာမျိုး ၊ ကျွန်တော့်အရည်အချင်းတွေ ချပြလို့ရ မည့် နေရာမျိုးမှာသာ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ခွင့်ရချင်သည်။ သို့သော် မတတ်နိုင်ခဲ့။ စားဝတ်နေရေး အတွက် အလုပ်လုပ်ကိုလုပ်ရမည်ဖြစ်ရာ စားပွဲအလုပ်ကိုပဲ လုပ်ခဲ့ရသည်။ ဒါတောင် ကျွန်တော် ကံကောင်း သည်ဟု ဆိုရမည်။ ရန်ကုန်လို နေရာမျိုးမှာက အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာ အတော်လေးကို ခက်ခဲ့သည်တဲ့။ ဦးလေးရွှေညို ကျွန်တော့်ကို ပြောပြဖူးပါသည်။
စားပွဲထိုး လုပ်နေပေမဲ့လည်း ကျွန်တော် လိုချင်သောအလုပ်ကို အမြဲမပြတ် ရှာဖွေနေခဲ့သည်။ လက်ရည် မကျသွားအောင်လည်း ဂစ်တာကို နေ့စဉ် တီး၏။ စားသောက်ဆိုင်မှာ တစ်နေကုန် တစ်နေခန်း ပြေးလွှား လှုပ်ရှားခဲ့သမျှ ခြေကုန်လက်ပန်းကျအောင် မောပန်းနေပေမဲ့လည်း တစ်နေ့ကို တစ်ပုဒ်တော့ မှန်မှန် တီးနေခဲ့ပါသည်။
ဇွဲကောင်းကောင်းနှင့် စုံစမ်းမေးမြန်းနေခဲ့ရာ တစ်ခုသော နေခြည်တောက်တောက် မနက်ခင်းတွင်တော့ ကျွန်တော် လိုချင်နေသာ အလုပ်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ စားသောက်ဆိုင် အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းတွေ သွားဝယ်ရာလိုက်သွားရာမှ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ခု၏ရှေ့တွင် ကြေညာဘုတ်လေး တစ်ခု ၊ ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုတတ်သူ အလိုရှိသည်တဲ့။ကျွန်တော့်မှာ ပျော်လိုက်သည့််ဖြစ်ခြင်း။ ကျွန်တော် စားသောက်ဆိုင်ကနေ အလုပ်ထွက်လိုက်တော့သည်။
လုံးဝ မထင်မှတ်ထားခဲ့ပါ။ အချစ်သောအရာကို သည်ကော်ဖီဆိုင်မှာ တွေ့ရလိမ့်မည်ဟု။ ဟုတ်သည် … ကျွန်တော် ‘ မ ’ ကို ထိုနေရာလေးမှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မ,သည် ကျွန်တော် အလုပ်လုပ် ချင်နေသော ကော်ဖီဆိုင်လေး၏ ပိုင်ရှင် ဖြစ်နေ၏။
ကျွန်တော် အလုပ်ရခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့က မ,ကို ငေးကြည့်ရင်း အချစ်သီချင်းချိုချိုလေးတွေ ကောင်းစွာ တီးပြ ဆိုပြနိုင်ခဲ့သည်။ မ,ကတော့ မသိခဲ့။ မ,သည် ကျွန်တော့်အသံကို နားလေးစွင့်ရုံ နားထောင်နေခဲ့ပြီး မျက်ဝန်းတွေကတော့ ဂစ်တာကြိုးလေးတွေပေါ်မှာ ပြေးလွှားဆော့ကစားနေသော ကျွန်တော့် လက်ချောင်းလေးတွေကိုသာ ငေးကြည့်နေခဲ့သည်။ ထို ငေးကြည့်နေသော ပုံစံလေးကိုပင် ကျွန်တော် စွဲလမ်းသွားရခြင်း ဖြစ်သည်။
မ,ရှိရာ ကော်ဖီဆိုင်လေးသည် ကျွန်တော်နေသော ရပ်ကွက်နှင့် နည်းနည်းတော့ လှမ်းပါသည်။ မိနစ်နှစ် ဆယ်လောက် လမ်းလျှောက်သွားရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်က လမ်ကြိုလမ်းကြားထဲမှာ ရှိနေပေရာ စီးသွားစရာ ကားလည်း မပေါက်ပေ။ စက်ဘီး ဆိုင်ကယ်ရှိလျှင်တော့ အတော်လေးကို အဆင်ပြေမည်။ ကျွန်တော် မမှုပါပေ။ မ,ရှိနေသည်ဆိုသောအသိလေးနှင့် ကော်ဖီဆိုင်သို့ ချီတက်နေသော ကျွန်တော့် ခြေလှမ်းတွေသည် သွက်ပြီးရင်း သွက်မြဲ။ ညောင်းလို့ညာလို့များ မညည်းညူမိခဲ့။ မ,၏ မျက်နှာလေးကို မြင်ယောင်မိလေတိုင်း ပန်းခဲ့သမျှ အမောပြေရသည်။ မ,ကို ကျွန်တော် အရမ်းချစ်မိနေပြီ။
မ,က အလိုက်သိတတ်ရှာ၏။ သူ့ဆိုင်က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ဆိုင်သွားဆိုင်ပြန် လမ်းလျှောက်နေရသည့် အဖြစ်ကို ကြာရှည်စွာ မကြည့်ရက်ခဲ့နိုင်ပါ။ ကျွန်တော့်အတွက် သူ လေ့ကျင်ခန်းလုပ်သည့် ပြိုင်ဘီးလေးကို သူ့အိမ်ကနေ ယူလာပေးလေသည်။ ထိုနေ့က ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပျော်ဆုံးလူသား ကျွန်တော်သာ ဖြစ်ပါ လိမ့်မည်။ မ,သည် အချို့ဆိုင်ရှင်တွေလို မဟုတ်။ ဝန်ထမ်းတွေ လိုအပ်တာရှိလျှင် ဖြည့်ဆည်းပေးတတ် သည်မှာ မ,၏ အကျင့်ကောင်းလေးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် မ,ကို ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးက လေးစား ချစ်ခင်ကြပြီး အလုပ်ကိုလည်း ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပေးကြသည်။ ထိုသူများထဲတွင် ကျွန်တော်လည်း တစ်ယောက်အပါအဝင် ဖြစ်၏။
မ,နှင့် ရင်းနှီးလာသည့်နောက်ပိုင်းတွင် မ,အကြောင်း တစေ့တစောင်း သိလာရသည်။ မ,၏ မိဘတွေသည် ချမ်းသာကြသည်တဲ့။ အခု ကော်ဖီဆိုင်ကိုတောင် မ,မိဘတွေက မ,ကို မွေးနေ့လက်ဆောင် ပေးခဲ့သည်တဲ့။ သည်အတိုင်းဆိုလျှင် မ,နှင့် ကျွန်တော့်ဘဝသည် မိုးနှင့်မြေလို။ မ,သည် ချမ်းသာသလောက် ဟန်ဆောင် ပဲများခြင်းလည်း မရှိ။ လှလည်း လှပေသည်။ လှသလောက် ရိုးသားပွင့်လင်းသည်။ တစ်ခါတုန်းက ကျွန်တော် သီချင်းဆိုနေကျ စတိတ်စင်ပေါ်တက်ပြီး ကျွန်တော်နှင့်အတူ စုံတွဲသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဟန်ဆောင် မှုကင်းစွာ သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့သည်ပင်။ ထိုအခါမှ မ,လည်း သီချင်းတွေကို ချစ်တတ်မှန်း ၊ သီချင်းတွေ ကို ကောင်းကောင်း ဆိုတတ်မှန်း သိခဲ့ရသည်။
မ,နှင့်ရင်းနှီးပတ်သက်မိလေလေ မ,ကို ကျွန်တော် ချစ်မြတ်နိုးလေလေ ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတလေ မ,၏ ချမ်းသာမှုတွေအကြောင်း စဉ်းစားမိတိုင်း ကျွန်တော် ရူးသွားချင်မိသည်။ ကျွန်တော့်မှာ တန်ခိုးသာ ရှိမည်ဆိုလျှင် မ,ကို ရိုးရိုးသာမန် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ဖန်ဆင်းပစ်လိုက်ချင်သည်။ အခုတော့ မ,ကို ချစ်ရသည်မှာ ရင်မောလှပါ၏။ ခံစားချက်တွေ သိုဝှက်ထားရခြင်းက ဘယ်လောက်တောင် ခက်ခဲ လိုက်သလဲ ခံစားဖူးသူတိုင်း သိကြပါလိမ့်မည်။ မ,ရေ … ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကြီး ပေါက်ကွဲတော့မည်။
မ,ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ပြောသည်။ ကြိုးစားပါတဲ့ … ထင်ညို့မှာ တဲလင့်ရှိသည်တဲ့။ ကျွန်တော့်ကို သီချင်းအဆိုပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ပြိုင်ခိုင်းသည်။ ကျွန်တော်သည် မ, ကြိုးဆွဲရာ ကမည့် မ,၏ ကရုပ်ကလေးပါ။ မ,သာ အားပေးမည်ဆိုလျှင် အမေရိကန်အင်ဒေါလ်တောင် သွားပြိုင်လိုက်ချင်သည်။ မ,၏ အကြံပေး မှုကြောင့်ပါပင် ကျွန်တော် သီချင်းအဆိုပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ယှဉ်ပြိုင် သည့် ပြိုင်ပွဲတိုင်းတွင်လည်း ပထမ ဒုတိယ တတိယ တစ်ဆုမဟုတ် တစ်ဆုတော့ ရရှိခဲ့သည်။
ကျွန်တော် အရမ်းပျော်သည်။ နှလုံးသားတစ်ခုလုံး ရင်ဘတ်ထဲက ခုန်ထွက်သွားမလားတောင် ထင်ရသည်။ ထိုနေ့လေးကို ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ မေ့တော့မည် မဟုတ်။ ထိုနေ့က ချစ်သူများနေ့ စုံတွဲသီချင်း ဆိုပြိုင်ပွဲတွင် မ,နှင့်ကျွန်တော် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပထမဆု ရရှိခဲ့သောနေ့ … ထိုပြိုင်ပွဲအပြီးတွင် ကျွန်တော် မ,ကို ရဲဝံ့စွာ ဖွင့်ပြောဖြစ်ခဲ့သော နေ့ပင်။ မ,မှာ ချစ်သူရှိနေသလား မရှိဘူးသလား ကျွန်တော် မသိ။
“ ကျွန်တော် မ,ကို ချစ်နေမိတယ် ”
ပြောပြီးပြီးချင်း ကျွန်တော် မျက်လုံးကိုမှိတ်ကာ ပါးပြင်ကို စောင်းပေးလိုက်သည်။ အခွင့်ကောင်းယူသည် ထင်ပြီး မ ကျွန်တော့်ကို အထင်သေးသွားမည်လား။ မျက်လုံး မှိတ်ထားရင်းက “ အခွင့်ကောင်းယူတာ မဟုတ်ပါဘူး မရယ် ” ဟု ဆက်ပြောမိသည်။ မ ကျွန်တော့်ပါးကို မရိုက်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ကို လေထဲမြောက် သွားစေမည့်စကားတစ်ခွန်းသာ မ,၏ နှုတ်ခမ်းဖျားက ထွက်ကျလာသည်။
“ တို့ မင်းကို မချစ်ဘူးဆိုပြီး ဟန်ဆောင်လိုက်ရင် ကောင်းမလား ဟင် ၊ ဆိုးတာက တို့ ဟန်မဆောင် တတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ”
အို … အိုးမိုင်ဂေါ့ဒ် ၊ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ပြန်ပွင့်လာပြီး ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆွဲဆိတ်ကြည့်မိသည်။ နာ၏။ မည်သို့ ဖြစ်သွားသည် မသိပေ … သတိထားမိလိုက်သည့် အချိန်မှာတော့ မ,ထံမှ “ သွား ” ဆိုသော စကားသံလေးနှင့် ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ မ,၏ လက်သီးဆုပ်လေး ကျရောက်လို့လာပါတော့သည်။ မ,ပါးပြင်တွင်လည်း နှင်းဆီတစ်ခင်း … ကျွန်တော် မ,ကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးစွာ ပြုံးမိ၏။ တစ်သက်မှာ တစ်ခါ ၊ တစ်ခါမှာ တစ်ယောက်ဆိုသော အချစ်မျိုးနှင့် ဘဝကြီး ပုံပေးပြီးတော့တောင် မ,ကို ကျွန်တော် ချစ်ရပါ သည်။
အချစ်သည် အရာရာကို ပြောင်းလဲစေတတ်သည်ဆိုလျှင် ပြောင်းလဲသူများထဲတွင် ကျွန်တော်သည် ထိပ်ဆုံး က ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ မ,၏ အချစ်တွေသည် ကျွန်တော့်ကို အရာရာ ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီ။ မ,က ဘွဲ့လေးတစ်ခု ရအောင် ယူပါဆိုသောကြောင့် ကျွန်တော် ကျောင်းပြန်တက်ခဲ့ရပြီ။ စာတွေက နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက် ကွာနေပြီဖြစ်သောကြောင့် မတက်ပါဘူးဟု ဆိုမိပေမဲ့လည်း မက “ မောင် မင်း တို့ကို လက်မထပ်ချင်ဘူး လား ” ဆိုသော စကားကြောင့် ကျွန်တော် မ,ကို ဒူးထောက်လိုက်ရသည်။ မ,က ကျွန်တော့်ကို လက်ထပ်ဖို့ အထိတောင် ရည်ရွယ်ပြီး ချစ်ခဲ့တာပါလားဟု သိလိုက်ရချိန်မှာ မ,ကို ကျွန်တော် ကျွန်တော့်အသက် ထက်အောင် ပိုချစ်သွားမိပါသည်။
မ,သည်သာ ကျွန်တော့်အသက် ၊ မ,သည်သာ ကျွန်တော့်ဘဝ ဖြစ်သည်။ မ,သာ ကျွန်တော့်လက်ကို တွဲထားမည်ဆိုလျှင် အရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲပါသည်။ မီးတောင်ကိုလည်း ကျော်ရဲသလို ဓါးတောင်ကို လည်း ဖြတ်ရဲသည်။ ဘယ်က သတ္တိတွေ ဝင်လာမှန်းမသိ။ မ,ကို ကျွန်တော် ချစ်သည်။ ထိုအချစ်တွေကြောင့်သာ ဖြစ်မည် ထင်၏။
သို့သော် တစ်ခုသော ညနေခင်းတွင်တော့ အရာအားလုံးကို ကျွန်တော် ဒူးထောက်အရှုံးပေးလိုက်ရသည်။ ကျွန်တော့်လက်ကို တွဲထားသော မ,၏ လက်ကို မ,ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ချသွားခဲ့သည်ပင်။ မ,၏ နှုတ်ခမ်း ပါးလေးမှ ကျွန်တော့်နှလုံးသားတစ်ခုလုံး အက်ကွဲသွားစေမည့် ရက်စက်စွာသော စကားတစ်ခွန်းကို ဆိုလာ၏။ “ တို့ လက်ထပ်ရတော့မယ် ” တဲ့။ သည့်ထက် ရက်စက်သည့် စကားတစ်ခွန်း သည်ကမ္ဘာမှာ ရှိသေးလျှင် ပြောလိုက်ပါလို့တောင် ကျွန်တော် ပြောလိုက်ချင်သည်။
ကျွန်တော် ရည်မှန်းထားသော ကမ္ဘာငယ်လေး အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ပျက်သုဉ်းသွားပြီ။ အစစ အရာရာ စီစဉ်ပြီးသွားပြီတဲ့။ မ,၏ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလေးသည် ကျွန်တော့်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ဟား တိုက်နေပေသည်။ မ,နှင့်လက်ထပ်မည့်သူက ကျွန်တော့်ထက် အပုံကြီးမက အပုံကြီး သာလွန် လွန်းနေသောသူတစ်ယောက်။ ဘွဲ့တွေမှ သူ့နောက်မှာ တသီ တတန်းကြီး။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ မြစ်တစ်စင်းလို စီးဆင်းနေသည်။
“ မ ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်ရက်ရတာလဲ ၊ မ ပြောတော့မောင်က မ,ကို လက်မထပ်ချင်ဘူးလားဆို ၊ မ ကျွန်တော့်ကို လက်ထပ်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ပြီး ချစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလား ”
မ ဘာမှမပြော။ မ,မျက်ဝန်းတွင်လည်း မျက်ရည်တွေ စမ်းချောင်းတွေလို စီးဆင်းနေသည်။ မငိုပါနှင့်။ ကျွန်တော်က “ ပြောပါ မ,ရယ် ၊ ပြောပါ ” ဆိုပြီး ပခုံးကို လှုပ်ကာ မေးတော့မှ …
“ ဟုတ်တယ် … မ မင်းကို လက်ထပ်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ပြီး ချစ်ခဲ့တာပါ ၊ ချစ်ခဲ့လို့ပဲ မ မင်းကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့ တယ်လေ ၊ မင်း ဘာပြောင်းလဲခဲ့သလဲ ၊ ဘွဲ့ရပြီးတော့လည်း ဂစ်တာကြီးနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေတယ် ၊ ပြောမှ လုပ်တာမျိုး မ မကြိုက်ဘူး မောင် ၊ ဒီတော့ မ ဘာလုပ်ရမလဲ ၊ မ မင်းကို ချစ်ရုံပဲ တတ်နိုင်တော့တယ် ”
မ ငို၏။ မျက်နှာကို လက်နှင့်အုပ်ပြီး ကျူကျူပါအောင် ငိုသည်။ ကျွန်တော် ဘာမှမဆိုသာတော့ပါ။ ကျွန်တော် မ,ရှေ့ ဒူးထောက်လိုက်ပါတော့သည်။
ထိုနေ့ညက အရာအားလုံး ပူလောင်နေခဲ့သည်။ ရင်ထဲက အပူ ၊ နွေည၏ အပူများ ၊ မသောက်စဖူး သောက် သည့် အရက်၏ အပူများဖြင့် ရင်တစ်ခုလုံး လောင်ကျွမ်းနေခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော် အခန်းဖော်သူငယ်ချင်း ကတော့ ပြောသည်။ မ, မမှားဘူးတဲ့။ သူ့ဘဝအတွက် သူ ရွေးချယ်သွားတာ မှန်သည် တဲ့။ နောက်ပြီး ပြောသေးသည်။ “ ယောက်ျားတစ်ယောက်က မိန်းမတစ်ယောက်ကို သေလောက်အောင် ချစ်နေပါစေ ၊ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုတောင် အရောင်တောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းအစမရှိသေးရင် အဲ့ဒီယောက်ျားဟာ ကိုယ် ချစ်နေတဲ့ မိန်းမကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လက်ထပ်နေမှာလဲ ” တဲ့။
ဘုရားရေ … ငိုနေသော မ,၏ မျက်နှာလေးကို မြင်ယောင်မိလေသည်။
ပါးပြင်ပေါ်သို့ စီးကျလာသော မျက်ရည်ကို လက်ဖမိုးဖြင့် မသိမသာ သုတ်လိုက်သည်။ အတိတ်သည် သုတ်ချလိုက်သော မျက်ရည်စက်နှင့်အတူ ပါသွားချေပြီ။ မောင့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ မရယ်။ တစ်ချိန်က မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုတောင်မှ အရောင်တောက်အာင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းအစတွေ မရှိခဲ့ တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
မီးကတော့ အခုချိန်ထိ ပြန်မလာသေး။ ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်မိသည်။ လမင်းကြီးသည် ဂုဏ်ယူ ဝင်ကြွားစွာဖြင့် ထိန်ထိန်သာလင်းလျက် ရှိသည်။
ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် အခုလို မီးပျက်နေသော လသာသာညတွေမှာ အိမ်နားက သူငယ်ချင်းတွေခေါ်ပြီး ဆော့ကစားလေ့ရှိခဲ့တာကို မှတ်မိသေးသည်။ ညဉ့်နက်တဲ့အထိကို ကစားနည်းတွေ မျိုးစုံအောင် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကစားခဲ့ကြသည်။ မိဘတွေက ညဉ့်နက်လို့ အိမ်ထဲ အတင်းဝင်ခိုင်းတာတောင် မဝင်ချင်ခဲ့။ ထိန်ထိန်သာနေသော လမင်းကြီးအောက်မှာ ဆော့ကစားနေရသည်ကို အထူးပင် မက်မော ခဲ့လေသည်။ နွေည၏ အပူတွေကြောင့်ရော ၊ ပြေးလွှားဆော့ကစားရလို့ မောပန်းနေ တာကြောင့်ရော ချွေး တလုံးလုံးနှင့် ပူအိုက်နေခဲ့ပေမဲ့ရင်ထဲမှာတော့ ပျော်ရွှင်နေခဲ့သည်။ ထိုပျော်ရွှင်မှုတွေနှင့် ပူလို့ပူမှန်းလည်း မသိ။ ကစားရမည်ဆိုလျှင် တစ်ညလုံး မမောနိုင်မပန်းနိုင် ကစားပစ်လိုက်ချင်ခဲ့သည်။
အခု ကျွန်တော်လည်း လရောင်အောက်မှာ ဆော့ကစားနေသော ကလေးလေးတစ်ယောက်လိုပင်။ တစ်ချိန်က နောင်တတွေနှင့်အတူ ခံစားခဲ့ရသော နာကျင်မှုဝေဒနာတွေက ဘယ်လောက်ပဲ ပြင်းထန် လွန်းလှပါစေ ၊ အဆိုတော်ဘဝ၏ အောင်မြင်မှုတွေကတော့ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးစေနိုင်ခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော် မိန်းမတစ်ယောက်၏ ဘဝကို အရောက်တောက်အောင် မစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သေးသော ယောက်ျား တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ပါ။
ကျွန်တော့်မှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရှိနေပြီ။ ကျွန်တော့်ကို အောင်မြင်မှုတွေက မျှားခေါ်နေပေပြီ။ မကြာတော့သော အချိန်အတွင်းမှာ မ,ကို ကျွန်တော် လုံးဝ မေ့ပျောက်သွားနိုင်တော့မှာပါ။ ကျွန်တော့် လုံးသား အငိုတိတ်ခါနီးပါပြီ။
လရောင်က နွေညတွေကို ပူလောင်မှုတွေကနေ မျှားခေါ်နေသလိုမျိုးပဲ ယခု ကျွန်တော် ရရှိထား သည့် အောင်မြင်မှုတွေကလည်း ကျွန်တော့်ကို မျှားခေါ်နေပြီလေ။ အဆိုတော်ဘဝဖြင့် ဒီထက် မက အောင်မြင်အောင် ကျွန်တော် ကြိုးစားရဦးမည်ပင်။
** ………………………………………………………………………………………. **
ပြချင်သူကပြလို့ တင်တဲ့သူကတင်တာကတော့မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် photoshop နဲ့ ပြင်ပြီး တင်ထား တဲ့ပုံတွေကြောင့် တဖက်သားနစ်နာပါတယ်။(၀ါသနာပါရင်ကိုယ်တယောက်ထဲစိတ်ကြိုက်ဖိုတိုရှော့နဲ့ ပြင်ပြီး စိတ်ကြိုက်ပြင်၊စိတ်ကြိုက်ကြည့်ကြပါ။ Online မတင်သင့်ပါဘူး။ အားလုံးအမေတွေနှမတွေရှိကြသူချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်မွေးကြစေချင်ပါတယ်။
Ko Latt အဲဒီပုံက photoshop နဲ့ ပြင် ထားတာ အစစ်ပါ ။မူရင်း ပုံက အတွင်းခံ ပါ ပါတယ် ။
Par Gyi သက်ဆိုင်ဆိုင်သူ ထွက်မပြောအခြင်းအတည်ဘဲ...??
ဒီပုံကို တင်တဲ့သူကိုယ်၌က သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ပုံဟာ ဒီပုံအတိုင်းဟုတ်ပါတယ်၊ စစ်မှန်ပါတယ်ဆိုတာကို အတည်မပြုနိုင်ဘဲနဲ့ အခုလို ရေးတင်တဲ့အပေါ် ဒီပုံဟာ လွဲမှားနေပါတယ်လို့ ဆိုလာခဲ့ရင် ခင်ဗျားတင်လိုက်တဲ့ ပိုစ့်ကြောင့် တဖက်သားဂုဏ်သိက္ခာကို ဘာနဲ့ တာဝန်ယူမလဲ ?
ခွပ်ဒေါင်းကတော့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုကို နားမလည်စရာ မရှိနိုင်လောက်ဖူးထင်တယ်နော်။
Thiri Mon photoshop လုပ်ပြီးတဖက်သားကို နစ်နာအောင်မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ် model မင်းသမီးမျာလည်း ဒီလိုပုံကိုရိုက်ပြီး နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ဆောင်နေတာကိုလည်း ကာကွယ်တားစီးသင့်ပါတယ်။ျ
Bama Thar ဖိုတိုရှော့နဲ့ပြင်ပြီး မိန်းကလေးတဦးကို သိက္ခာမချသင့်ပါဘူး။ ဒီပို့စ်ကို ဖျက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံ တနိုင်ငံမှာ... ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုပျောက်ရင်
တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်... လူမျိုးရဲ့ ဂုဏ်ကို ဖျက်ဆီးနေကြသော
မိတ်ဆွေများသို့တောင်းပန်ခြင်း....
ကျွန်တော် ဒီလိုပုံမျိုးကို တင်ပေးလိုခြင်း အလျှင်းမရှိပါ..
အခု ဒီပုံဟာ ကိုယ့်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ဖျက်ဆီး
သော အပြုအမူ လုပ်ရပ်ဖြစ်သောကြောင့်...
ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် တပ်လှန့် သံ အနေဖြင့်
1.ဦးနှောက်မှာရေ 80% ပါဝင်ပါတယ်...
ကူညီသိမ်းစည်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်...
3. ဦးနှောက်ရှိ Neuron တွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်ပို့ ဆောင်ချက်တွေဟာ
ပြန်တွေးတဲ့အချိန်မှာ သိပ်မမှတ်မိတာနဲ့ မှတ်မိလွယ်တာမျိုးတွေရှိတတ်တာ
5. ဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းရည်ဟာ 10-watt ရှိတဲ့မီးလုံးတစ်လုံးရဲ့အားနဲ့ ညီမျှပါတယ်
ယာဉ်အတွင်းထည့်ထားသော ငွေကျပ်သိန်း(၆၀၀)ကျော် တန်ဘိုးရှိ ရွှေထည်ပစ္စည်းများခိုးမှုမှ တရားခံများအား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ
၁.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ်နေ ဦးထွန်းမြင့်သည် ၎င်းပိုင် OASIS ကားအရောင်း ပြခန်းအတွင်းရှိ CROWN အဖြူရောင်ယာဉ်၏
နောက်ဖုံးအတွင်း၌ ရွှေထည်ပစ္စည်းမျိုးစုံ ၊ ခန့်မှန်း တန်ဘိုးငွေကျပ် သိန်း(၆၀၀)ခန့်အား ထည့်ထားခဲ့ပြီး ၂.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့ညနေပိုင်း တွင်သတိရ၍ သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရှိရသဖြင့်
ဦးထွန်းမြင့်မှစုံစမ်း ဖော်ထုတ်အရေး ယူပေးရန် ၃.၉.၂၀၁၃ရက်နေ့တွင် တိုင်ကြားခဲ့သောကြောင့် ကမာရွတ်မြို့မရဲစခန်း (ပ)၃၉၄ /၂၀၁၃၊
ပုဒ်မ ၃၈၀ ဖြင့်အမှုစုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကမာရွတ်မြို့မရဲစခန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ ကားအရောင်းပြခန်းရှိဝန်ထမ်းများအား စစ်ဆေးချက်အရ ၁.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ဝေဖြိုးဟန်နှင့် မလှရီတို့မှာ
CROWNယာဉ်အနီးတွင်ရှိနေကြောင်း ယာဉ်အားသန့်ရှင်းရေး လုပ်သည်မှာ ဝေဖြိုးဟန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝေဖြိုးဟန်မှာ ၂.၉.၂၀၁၃ရက်နေ့
စစ်ဆေးချက်များအရ ဝေဖြိုးဟန်နေထိုင်သည့် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်သို့ သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ရာ ဝေဖြိုးဟန်မှာ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင် တည်းခိုနေထိုင်
နေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် သက်သေများနှင့်အတူ ၀င်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာ ၎င်းထံမှ ရွှေလက်ကောက်(၁)ကွင်းအား သိမ်းဆည်းရမိပြီး
အဆိုပါပစ္စည်းမှာ ၁.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၆၃၀အချိန်ခန့်က ဦးထွန်းမြင့်ပိုင် CROWN ယာဉ်အတွင်းမှ ခိုးယူခဲ့သည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေး
အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဝေဖြိုးဟန်မှ ခိုးယူရရှိသည့်
ပစ္စည်းများအနက်မှရွှေလက်ကောက်(၁)ကွင်းအားအရောင်းစားရေးဖြစ်သူ မလှရီထံတွင်ပေးထားခဲ့ကြောင်း၊ ကျန်ပစ္စည်း များအား ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ရှိ အစ်ကိုဖြစ်သူ၏ နေအိမ်တွင်
အမှုမှ ပစ္စည်းများခိုးယူသူ ဝေဖြိုးဟန်(ဘ)ဦးဟန်တင့်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်နှင့် မလှရီ(ဘ) ဦးမောင်ကျော်ညွန့်၊
ကျောက်တော်မြို့နယ် နေသူတို့(၂)ဦးအားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး သက်သေခံပစ္စည်းများအား ပြန်လည်သိမ်းဆည်းကာ
Learning English - အင်္ဂလိပ်စကားပြောပိုကောင်းစေရန်နည်းလမ်းများ (အပိုင်း-၁)
Posted by zar ni (My Way!) on October 20, 2010 at 12:48 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်းကိုမေးလိုက်။ ဘာလုပ်နေလဲ “အင်္ဂလိပ် စပီကင် တက်နေတယ်” ဟူသည့်အဖြေကို ညံညံစီစီ ကြားနေရသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ၏အရေးကြီးပုံကိုလူတိုင်း သဘောပေါက်နေကြပြီဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ကလို ကျွန်လုပ်ချင်သည့်သူများအတွက် စာနှင့်စကားဟု ယိုးစွပ်သည့်ခေတ်မဟုတ်တော့ပြီ။သူသူငှာငှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ချင် ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်လို ဒွတ်ဒက်ရွှတ်ရှက် နှင့်ပြောနေ သူတစ်ယောက်ကို မြင်ရကြားရတိုင်း သူတို့လိုပြောတတ်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာ တတ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်လည်း ဟိုသင်တန်း ဒီသင် တန်းတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီး တက်ကြ ပြန်သည်။ သင်တန်းတွေကလည်း သင်ပေးကြပါသည်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်တစ်ကယ်မြို့ထဲမှာ တိုးရစ်တစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို အိမ်သာ ဘယ်နေရာ မှာရှိသလဲလို့ လာလည်းမေးရောရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်၊ ပါးစပ်က အာစေးထည့်ထားသလို ပြောမထွက်၊ တိုးရစ်က တစ်လုံးချင်းအသံအကျယ်ကြီးထွက်ပြောတာကိုလည်းနားမလည်၊ အင်း- အဲ လုပ်ရင်း ကိုယ်ပြောချင်တာက တစ်မျိုး၊ တစ်ကယ်ညွှန်ပြလိုက်တာက တစ်ခြားနဲ့ဧည့်သည် လည်း ရောက်ချင်ရာရောက်။ နောက်ပိုင်း သွေးအေးသွားသည့်အချိန်ပြန် စဉ်းစားလိုက်မှငါ ဒီလို ပြောလိုက်ရင်ရတာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလိုပြောဖို့ သတိမရခဲ့ရတာလဲ ဟု မကြေမချမ်းနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြစ်တင်ရသည့်အဖြစ်မျိုး ကြုံဖူးကြမည် ထင်ပါသည်။
မိမိတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါ။ စာသင်သားအများစုဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားကို သွက်သွက်လက်လက်နှင့် ကိုယ်ပြောတာကို သူများနားလည်၊သူများပြောတာကိုလည်း ကိုယ်ကနားလည် ဖြစ်ချင်ပါက အောက်ပါနည်းလမ်းများက မိမိဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ပါလိမ်ည်။
အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးနေတဲ့ ဆရာတစ်ဦးအနေနဲ့ ဒီမေးခွန်းကို သင်တန်းသား များစွာကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အများစုကတော့ အင်မတန်ယျေဘုယျ ကျတဲ့ အဖြေ ကိုပဲပေးတတ်ကြပါတယ်။
ဒီအဖြေတွေမှားသလားဆိုတော့ မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မပြည့်စုံပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စကားကို ပြော တတ်ချင်လို့ ဆိုတဲ့သူကို
ဘာလို့ပြောတတ်ချင်ရတာလဲ။ ဘယ်လိုပြောချင်တာလဲ၊ ဘာအတွက် ပြောမှာလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာပြောမှာလဲ၊
ဘယ်လောက်ပြောတတ်ချင်တာလဲ . .. စတဲ့မေးခွန်းတွေ ဆက်မေးလျှင်တော့ ရေရေရာရာမရှိဘဲ
ဒါကြောင့် ဘာဖြစ်လို့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောချင်ရတာလဲဆိုတာကို မိမိကိုယ်မိမိသိအောင် ဦးစွာ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး လေ့လာရမည့်
နည်းစနစ် ကွဲပြားသွား နိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားကိုဈေးသွားဝယ်မယ့်သူတစ်ယောက်အတွက် သင်ခန်းစာနဲ့ ကျောင်းသွားတက်မယ့် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည် လိုအပ်ချက်
ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ၄င်းစွမ်းရည်တွေတတ်ကျွမ်းအောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားရမည့်နည်းနာ
တွေလည်း ကွဲပြားမည်ဆိုတာ သိသာလှပါတယ်။
စကားပြောရခြင်း၏ အခြေခံအကျဆုံးနှင့်အဓိကအကျဆုံး ရည်ရွယ်ချက်သည် “ဆက်သွယ်ခြင်း” သတင်းပေးဖို့
/ယူဖို့ အတွက်ဖြစ်သည်။ (communication purpose) မိမိအင်္ဂလိပ်လို ပြောတတ်ကြောင်း ကြွားဝါဖို့မဟုတ်၊
ဂုဏ်ယူဖို့ မဟုတ်။ (စာဖတ်သူအနေဖြင့် ခေတ္တရပ်၍ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မှန်သည်ဟုယူဆပါက ဆက်ဖတ်ပါ။)
သင်သည် သာမန် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတစ်ဦးသာဖြစ်သည်။ သူတို့ကဲ့သို့ အပြောင်မြောက် ဆုံးစကားပြေ သို့မဟုတ် အပြောစကားမျိုး ဖန်တီးရန်သင့်မှာ တာဝန်မရှိပါ။
သင့်မှာ မှားနှိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ မှားမှာကို မကြောက်ပါနှင့်။ အမှားတွေ့ဖူးမှ အမှန်ကိုသိပါမည်။
အမှားကို ကြောက်နေပါက သင်ဘာမျှ ဖန်တီးဖို့ သတ္တိရှိမည် မဟုတ်ပါ။ Guiora (1973) ဆိုတဲ့ပညာရှင်
ကတော့ ၄င်းဖြစ်စဉ်မျိုးကို ego permeability မရှိခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ် စကားသွက်သွက် လက်လက် ပြောချင်ရင်
လူရှေ့ သူရှေ့မှာ ပြောရဲဖို့အားမွေးထားပါ။
(ချွင်းချက်။ ပင်ကိုယ်က နှုတ်နည်းသူ၊ အရှက်အကြောက်ကြီးသူတွေအဖို့ ကိုယ့်မိခင်ဘာသာ စကားနဲ့တောင်ပြောရဆိုရမှာခက်နေကြတော့ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလျှင်တော့
အင်မတန်ဝန်လေးစ ရာပင်။ ထိုသူများအတွက်တော့ သီးခြားရေးပါမည်။)
တက္ကသိုလ်က အင်္ဂလိပ်စာ ကထိကတစ်ယောက်။ စာရေးလျှင်တစ်လုံးမှမှား၊ စကားပြောလျှင် တော စာတစ်ကြောင်းပြောဖို့ မနည်းစဉ်းစားပြီးထစ်ငေါ့ထစ်ငေါ့ပြောရသည်။
(မယုံမရှိပါနှင့်။ ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့ပါ)
သံရုံးမှာလုပ်သည့် ထမင်းချက်တစ်ယောက်။ စာတစ်လုံးမှ မတတ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောလျှင်တော့ လျှောကနဲ။ တက္ကသိုလ်ဆရာက ထမင်းချက် ပြောသမျှ
သဒ္ဒါနည်းလမ်းမကျဟုထင်သည်။ တကယ်လည်းမှားနေသည်။ ဒါပေမယ့် သူက မှားပေမယ့် သွက်သည်။ သူ့စကားကို
တစ်ဖက် လူနားလည်သည်။ ဟိုဆရာကတော့ မမှား။ ဒါပေမယ့် မသွက်။ ထစ်ငေါ့နေတော့ သူပြောသမျှ
စကားကို ဆက်စပ်စဉ်းစားပြီးနားလည်ဖို့ တစ်ဖက်လူမှာ စိတ်မရှည်၊ နားမလည်။ နောက်ဆုံး တော့
ဆက်သွယ်ရေးမအောင်မြင် (communication breakdown) ဖြစ်ရတော့တာပေါ့။
သွက်ဖို့ အဓိကလား၊ မှန်ဖို့ အဓိကလားဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို အသုံးချ ရမည့် အခြေအနေအပေါ် မူတည်ပြီးသာ
ကျွန်တော်၏အယူအဆအရဆိုလျှင် စကားပြောရာမှာ သွက် ဖို့ကအရင်ဖြစ်သင့်ပါသည် (fluency first)။ မှန်ဖို့ကနောက်မှ လိုက်သင့်ပါသည်(Accuracy
later)။ စာရေးလျှင်တော့ မှန်ဖို့နှင့်တိကျဖို့က အရေးအကြီးဆုံးဟု ၀န်ခံပါသည်။
ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာ တစ်ခုက သွက်သွက်လက်လက်ပြောတတ်ခြင်းဆိုတာ ကိုယ့်နောက်က ကျားလိုက်သလို
စကားကို အသက်မရှူဘဲပြောချင်းမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ပြောချင်တာကို သဒ္ဒါနည်းအရ မှားနေသော်လည်း
နားထောင်သူ နားလည်အောင် အထစ်အငေါ့မရှိ ပြောတတ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားပဲပြောပြော၊ မြန်မာစကားပဲပြောပြော၊ မိခင်ဘာသာစကားကိုပြောသူများ သဒ္ဒါ နည်းမကျသည့်ဝါကျများကိုပြောနေကြသည်မှာအဆန်းမဟုတ်ပါ။
”I don’t want no money” ကဲ့သို့ double negative များကို ဟောလီးဝုဒ်၏နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်များ
ပြောနေကြပါ သည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ”ဥက္ကဌကြီးအား မိန့်ခွန်းပြောကြားပေးပါရန်......”
ဆိုသည့် စကားအမှားကို ပြောလွန်း၍ ကြည့်မရသည့် မြန်မာစာဌာနက နေ့တိုင်း မြန်မာစာ မြန်မာစကား
ဆိုသည့်အစီအစဉ်ကို ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ထုတ်လွှင့်နေရသည်မဟုတ်ပါလော။
ထို့ကြောင့် မိခင်ဘာသာစကားကို ပြောသူများပင် သဒ္ဒါ အမှား ပြောမိသည်ဆိုပါက ကျွန်တော် တို့လို နိုင်ငံခြားဘာသာအဖြစ်
သင်ယူသူများအတွက် အမှားဆိုတာ ကြောက်စရာတစ်ခု မဖြစ်သင့်ပါ။
ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာက ပြောရဲဖို့ကပထမ၊ ပြောရင်းနဲ့မှားသွားတာကိုသိပြီး နောက်တစ်ခါထပ်မမှားတော့အောင် အမှန်ကို ပြောတတ်ဖို့ အဓိက (Broken English to Spoken English) ဆောင်ပုဒ်ကို ကျင့်သုံးစေချင်
ပါတယ်။ ပြောပါ။ မှားလျှင်ပြင်ပါ။
စကားလုံးတိုင်းကို ပီပီသသနဲ့ ရေပက်မ၀င်ပြောသည့်စကားကို သင် ကွက်စိပ်ဟောဆရာနှင့် ဇာတ်သဘင်တွေမှာပဲကြားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တကယ့်အပြောစကားစစ်စစ်မှာတော့ ရပ်တဲ့နေ ရာရပ်၊ စကားထပ်သည့်နေရာထပ်၊ အမှားပြန်ပြင်သည့်နေရာပြင်
စသည်ဖြင့် ပြောကြရတာပါ။ BBC World Service ကထုတ်တဲ့ Better Speaking ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးထဲက
“This was my dream, all my life and ... er... you know.... to serve for the match, suddenly I have amatch point out of nowhere, you know.... I came here, nobody even talked aboutme and now I’m holding this trophy. And it’s, it’s just.... this support todayis like ... er.... I mean....I was..... er... three times in the final butthis, this is just unbelievable, this is too good... . ”
ဒါဟာ တကယ့်အပြင်မှာပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပါ။ သဒ္ဒါမမှန်တဲ့ဝါကျ၊ မပြည့်စုံတဲ့ဝါကျ၊ ပါပေမယ့် ဒီလိုပဲပြောကြတာပါ။ ချရေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေကိုရွတ်ပြနေတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီး er တို့ you know, I mean တို့ စတဲfillers လို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေနဲ့ ထောက် ပြီးနောက်ပြောမယ့်စကားအတွက် စဉ်းစားချိန်ယူသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် စကားသွက်ဖို့အတွက် fillers တွေကို သူ့နေရာနှင့်သူ နည်းလမ်းတကျသုံးတတ်ရန် လေ့ကျင့်ရပါမယ်။
Learnalanguage in chunks ဆိုတဲ့ ဘာသာစကားလေ့လာမှုဆိုင်ရာ အဆိုအမိန့်လေးကိုသဘောကျလို့ထည့်ရေးလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသတင်းတွေနားထောင်တော့ “coming upnext...”, “thank you for watching...” စတဲ့စကားတွဲလေးတွေကို ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။နားထောင်တာများလာတော့ နားလည်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုစကားလုံးတွဲတွေကို chunks ကိုခေါ်ပါတယ်။၄င်းကဲ့သို့စကားလုံးအတွဲလေးတွေကို လေ့လာမှတ်သားထားပါက မိမိပြောဆိုဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာစာလုံးတစ်လုံးချင်းစဉ်းစားစရာမလိုဘဲနဲ့ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အမှားအယွင်းလည်းနည်းသွားတာပေါ့။နောက်တစ်ခုက collocation လို့ခေါ်တဲ့အတူတကွတွဲဖက်သုံးစွဲရတဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းမှတ်သားထားရပါမယ်။do your homework လို့ပဲသုံးလေ့ရှိပြီး make your homework လို့မသုံးပါဘူး။ do နဲ့make က ပြုလုပ်သည်။ အတူတူပဲလို့ မြန်မာလိုစဉ်းစားပြီး အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လိုက်ရင် မှားပေလိမ့်မည်။
3:48:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
နယူးယောက်မြို့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းခြေ တစ်နေရာမှာ တောင်းစားနေတဲ့ လူမည်း အမျိုးသား တစ်ဦးကို တွေ့ရှိပြီး ယခုလို အိုင်ဒီယာ ရသွားခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။
သင်ပေးသူကလည်း လူငယ်ပါပဲ။ Patrick McConlogue အမည်ရ အမေရိကန် နိုင်ငံသား ပရိုဂရမ်မာ၊ ဝဘ်ဒီဇိုင်နာ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အိုင်တီ ပညာ ရပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ တောင်းစား နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငွေပေးမယ့် အစား ပညာသင်ပေးရင် သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုပ်စား လို့ရမယ်လို့ စိတ်ကူးမိပြီး စည်းရုံးညှိနှိုင်းပါတယ်။
ဒီလို သင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကို သိသွားတဲ့ Patrick McConlogue ဟာ အခြားသော အိမ်ခြေရာမဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကိုပါ Programming ပညာ သင်ကြားပေးမယ့် ပရောဂျက် စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပြီး ပါဝင်လှူဒါန်းမယ့် သူတို့ အများအပြား ရှိလာပါတယ်။ ဒီတော့ အမေးအဖြေကဏ္ဍတစ်ခုမှာ ပရိုဂမ်မာ Patrick McConlogue ပြောလိုက်တဲ့ စကား ကတော့ အောက် ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာရေးကျောင်း ဓနိ မိုးပေါ်သို့ မီးတုတ်ပစ်တင်သွားသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်စုံစမ်းနေစဲ
2:23:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက် ၊ ယုဝ လမ်း အမှတ်( ၁၉ ) ၌ ရှိသော အစ္စလာမ်ဘာသာရေးကျောင်း ဓနိ မိုးပေါ်သို့ တစ်ပေ ပတ်လည် ခန့်ရှိ သစ်သားဖြင့် အ၀တ်စုတ်ပတ်၍ အင်ဂျင်ဝိုင် စိုနေသည့် မီးတုတ် ပစ်တင်သွားသော ကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်စုံစမ်းနေစဲ ဖြစ်ကြောင်း သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးသက်ထွန်း ကပြောသည်။
"၄ ရက်နေ့ နံနက် ၂ နာရီ ၅ မိနစ်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးကျောင်း ဓနိမိုးပေါ်ကို မီးတုတ်နဲ့ပစ်တင်သွားခဲ့တယ် ။ အခု မျက်မြင်သက်သေ တစ်ယောက်ကို စစ်ဆေးနေတယ် ။ " ဟု ရဲမှူးက ပြောသည်။
အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအထက်တန်းကျောင်းအုပ် ဦးခင်အောင် ( ခေါ် ) ဦးရာစူမန်က ယခုကိစ္စတွင် တာဝန်ရှိသူများမှ ဆောင်ရွက်နေသည့် အပေါ်ကို ပြောစရာမရှိကြောင်း ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချစ်ခြင်းရင်းနှီးမှုသာ လိုလာကြောင်း ၊ ၀တ်ပြုဆုတောင်းနေခါတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းဖို့သာ ဆုတောင်းနေတယ် " ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် လုံခြုံရေးအတွက် လှည့်ကင်း ၊ ၀တ်ကင်း များ ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရသည်။
မကွေးတွင် ဘာသာခြားတစ်ဦးမှ အသက် ၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား မုဒိန်းကျင့်တယ်ဆိုသောကြောင့် လူများစုဝေး
2:03:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့နယ်၊ မင်းကင်းကျေးရွာ တွင် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ညနေ ၆း၀၀ နာရီခန့်က ဘာသာ ခြားတစ်ဦးက အသက် ၆ နှစ် အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦးအား မုဒိမ်းကျင့်သည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မကွေး မြို့၊ မင်းကင်းကျေးရွာအနီးတွင် အဆိုပါနေ့ည ၉ နာရီခန့်က လူသူ စုရုံးခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
““မကွေးဆေးရုံနားမှာရှိတဲ့ ဘာသာခြားတွေနေတဲ့ ရပ်ကွက် တစ်ခုမှာဘာသာခြားတစ်ယောက် ကနေပြီးတော့ အသက် ၆ နှစ် အရွယ်ကလေးကို မုဒိမ်းကျင့် တယ်ဆိုပြီးတော့ သတင်းတွေ ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ လူစုရုံး ပြီးတော့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမလိုဖြစ် ခဲ့တယ်။ အခုရဲတွေက အခြေ အနေကို ထိန်းသိမ်းထားတယ်”” ဟု မကွေးမြို့နေပြည်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ လူသူစုရုံးလာမှု ကြောင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က လုံခြုံရေးအစီအမံများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဒေသခံ အချို့ထံက သိရသည်။
““ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လိုက်လုပ် နေပါတယ်။ အခုအချိန်မှာလုပ် နေတုန်းမို့လို့ ဘာမှမပြောပြနိုင် သေးပါဘူး”” ဟု မကွေးမြို့အမှတ် ၂ ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဘာသာခြားများကြောင့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းတွင် ကောလာဟလ သတင်းများ ဖန် တီးကာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် တွန်းအားပေးခြင်း များလည်းဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိ ကြောင်း နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူများ ၏အဆိုအရသိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ဗီဇာသက်တမ်း လေးနှစ်ကုန်ဆုံးသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တစ်လပြန်လာပြီးမှ ပြန်လည်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိမည်
12:21:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဗီဇာသက်တမ်း လေးနှစ်ကုန်ဆုံးပြီးသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအတွက် သုံးနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာပြီးမှ ထိုင်းတွင် အလုပ်ပြန်လည် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိမည်ဟူသည့်အစား ယခုအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သုံးနှစ်အစား တစ်လပြန်လာပြီးမှသာ ထိုင်းတွင်အလုပ် ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိမည်ဟူ၍ ထိုင်းအလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနနှင့် သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ကြောင်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကွန်ရက်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ သိရသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်က ထိုင်းနှင့်မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နားလည်မှု စာချွန်လွှာအရ ဗီဇာသက်တမ်း လေးနှစ်ပြည့်ပြီးသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အနေဖြင့် အမိနိုင်ငံသို့ သုံးနှစ်ပြန်လည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်သွားရောက်ခွင့်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် ဗီဇာသက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများမှာ overstay ဖြင့် နေထိုင်မှုများ ရှိခြင်းကြောင့် တရားမ၀င် နေထိုင်မှုများရှိကာ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းများ ကြုံတွေ့လာကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအချက်များကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကွန်ရက်၊ အလုပ်သမား သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ကော်မတီ၊ ပြည်သူပိုင်လုပ်ငန်း အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်၊ ရွှေ့ပြောင်းရေးရာ လှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့တို့နှင့် ထိုင်းအလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနတို့သည် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၌ ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်ဒေသတွင် လေးနှစ်ဗီဇာ သက်တမ်းပြည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကွန်ရက်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ သိရသည်။
"ဗီဇာသက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးတဲ့ အလုပ်သမားတွေ အနေနဲ့ overstay နေလိုက်မယ်ဆိုရင် တရားမ၀င် အလုပ်သမားတွေ ဖြစ်သွားပြီးတော့ အရင်လိုပြန်ပြီး ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်။ အရင်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ စနစ်အရဆိုရင် မပြန်ချင်တဲ့ သူတွေကတော့ နေကြမှာပဲ။ အဲဒါဆို သူတို့တွေအတွက် ဒုက္ခဖြစ်နိုင်တယ်။ အခုလို သုံးနှစ်အစား တစ်လပြန်ပေးလိုက်တော့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက် စိတ်အေးသွားတာပေါ့" ဟု ထိုင်းအခြေစိုက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကွန်ရက်မှ တာဝန်ခံ ကိုထွန်းက ပြောကြားသည်။
ယင်းသဘောတူညီချက်ကို စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အစည်းအဝေးပွဲတွင် ထိုင်းအလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Pravit Khiengpol က ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယခု ဗီဇာသက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အနေဖြင့် သက်တမ်းတိုးရာတွင် မဲဆောက်၊ မဲဆိုင်၊ ရနောင်း၊ ကန်ချနာပူရီ ဒေသများတွင် သက်တမ်းတိုးနိုင်ကြောင်း၊ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်မည့် အလုပ်သမားများ အနေဖြင့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သဘောတူညီထားသော လုပ်အားခ အလုပ်ချိန်၊ လူမှုဖူလုံရေး ထောက်ပံ့ကြေးငွေ စသည့်စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် လုပ်ကိုင်ပြီးမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းအလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Pravit Khiengpol က ပြောကြားသည်။
စက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင်လည်း အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်သွားရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Ju Ju K ကို view ပေါင်းစုံနဲ့ view မယ်
12:07:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ကျွန်မရဲ့အိမ်ထောင်ရေး အောင်မြင်တယ်လို့ထင်တာပဲလို့ဖွင့်ဟလာတဲ့ ဟန်ဂါအင် Han Ga In
11:56:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
လရောင်ဖန်ဆင်းနေမင်းကြမ္မာ (The Moon Embraces The Sun)၊ “Architecture 101” ရုပ်သံရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့အောင်မြင်လာသည့် ဟန်ဂါအင်သည် ကုန်ပစ္စည်းကြောငြာသရုပ်ဆောင်ဘဝမှ ထိပ်တန်းမင်းသမီးဘဝကိုရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ အောင်မြင်တဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး တစ်ဦးဖြစ်ဖို့အတွက် ၁၀နှစ်တာကာလကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပါ သည်။၂၀ဝ၅တွင်သူမရဲ့ အသက်၂၄နှစ် အရွယ်မှာပဲ သူ၏ချစ်သူ မင်းသားယွန်ဂျွန်ဟွန်းနှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့၏ အိမ်ထောင်ရေး သက်တမ်း၈နှစ်ရှိ နေပြီ ဖြစ်သော်လည်းလူတွေရဲ့ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း ကိုခံနေရဆဲပါပဲ။ ၂၀၁၂မှာတော့(The Moon Embraces The Sun) စီးရီးကြေင့်အောင်မြင်မှုတွေကို အသစ်တစ်ဖန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ဒီတစ်ပတ်တော့ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်သရုပ်ဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ရင်တွင်းခံစားမှုတစ်ချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Q - အခုတလော အလုပ်တွေရှုပ်နေသလိုပဲ။
A - တကယ့်ကိုပဲအလုပ်တွေရှုပ်နေပါတယ်။ “Architecture” ပရိုမိုရှင်းတွေနဲ့အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ “လရောင်ဖန်ဆင်း၊နေ မင်းကြမ္မာ” မှာသရုပ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်တွေထက်စာရင်တော့ မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပဲ။ အဲဒီတုန်းကဆိုရင်တစ်နေ့ကို၃၊ ၄နာရီထက် ပိုမအိပ်ခဲ့ရဘူး။ အဲဒီရုပ်သံစီးရီးကြောင့် ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကို နောက်ရွှေ့ခဲ့ရတယ်။(ရယ်လျက်)
Q – “လရောင်ဖန်ဆင်း၊နေမင်းကြမ္မာ” ရုပ်သံစီးရီးကိုစရိုက်ကူးတော့ဇာတ်လမ်းထဲက ကလေးသရုပ်ဆောင် နဲ့မင်းသားသစ်ကင်ဆိုဟွမ်ကိုပဲ အာရုံထားခဲ့ကြတာနော်။ အဲဒီအတွက်ရှင်ဘာမှ မခံစားရဘူးလား။
A - ဘာမှမခံစားရပါဘူး။ ကျွန်မအတွက်ပိုပြီးတော့ ပိုပြီးတောင်လွတ်လပ်နေသေးတယ်။ ကျွန်မသာ အာရုံစူးစိုက်ခံနေရရင် ဖိအားတွေကိုပိုခံစားရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ကင်ဆိုဟွမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂျွန်အီးဝူးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးထက်တော့ကျွန်မမှာသရုပ်ဆောင်အတွေ့အကြုံတွေပိုများပါတယ်။(ရယ်လျက်) အဲဒါကြောင့်ကျွန်မဘာကိုမှမစိုးရိမ်ခဲ့ဘူး။
Q – “လရောင်ဖန်ဆင်း၊နေမင်းကြမ္မာ” ရုပ်သံစီးရီးကြောင့်ရှင့်အက်တင်တွေပြိုပီးထင်းရှားလာခဲ့တာနော်။ ဒါပေမဲ့ရှင့်ကိုတော့ “Architecture” ရုပ်ရှင်မှာ ပိုပြီးအမွှန်းတင်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲလို့ ရှင်ထင်သလဲ။
Q - ဒါတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်မ “Architecture” ရုပ်ရှင်မှာ အရင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာ။ပရိတ်သတ်တွေကအဲဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်ကိုပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့တာလို့ကျွန်မကတော့ထင်တာပဲ။ကျွန်မကရုပ်ရှင်ထဲကဇာတ်ကောင်နဲ့ပိုပြီးဆင်တယ်လေ။
Q - ဒီရုပ်ရှင်က”အချစ်ဦး” အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို နောက်ခံ ရိုက်ကူးထားတာနော်။ ရှင်ကိုအဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးမေးခွန်းတော်တော်များများမေးခဲ့ကြတယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မအတွက်အဲံ့ဩနေရတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ရှင့်ရဲ့အချစ်ဦးရှင့်ဆီကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လာခဲ့ရင်ပေါ့ ……..
A - ရှင်ပြောသလိုပါပဲ။
ကျွန်မကိုအဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့တော်တော်မေးခဲ့ကြတယ်။ သူ ကျွန်မကို ကောင်းမွန်တဲ့အမှတ်တရတွေပေးခဲ့တယ်။ သူလဲကျွန်မလိုဖြစ်မှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မကြောင့်သူဘဝထိခိုက်သွား မှာကိုတော့ကျွန်မစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ သူသာ ကျွန်မကိုလာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့နှစ်ဦးစလုံးမှာရှိနေတဲ့ကောင်း မွန်တဲ့အမှတ်တရတွေ လှုပ်နှိုးခြင်းခံရမှာပါပဲ။ ကျွန်မတို့အသက်၆၀ကျော်မှပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီး တော့သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မှာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေလိုပေါ့။ ကျွန်မတို့တွေမတော်တဆတွေ့ခဲ့မိရင်တော့ ဇာတ်လမ်းက လုံးဝ ကွဲပြားသွားမှာပေါ့။(ရယ်လျက်)
Q - အနမ်းဇာတ်ဝင်ခန်းတွေအတွက် ရှင့်ခင်ပွန်းက ရှင့်ကိုသဝန်မကြောင်ဘူးလား။
A - သဝန်ကြောင်တယ်၊ အဲဒီလောက်လေးနဲ့တော့ ပြဿနာမဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့တွေ အဲဒီကိစ္စလေး အတွက်တောင်နားလည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်မ တို့တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြမလဲ။ ကျွန်မအလုပ်တွေများလွန်းလို့ကျွန် မခင်ပွန်းကို ဂရုမစိုက်နိုင်တာကိုပဲအားနာနေရတာ။ကျွန်မရုပ်သံဇာတ် လမ်းတွဲမှာသရုပ်ဆောင် နေရတုန်းက တစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်ပဲ အိမ်ပြန်နိုင်တယ်။ ပြန်တဲ့တစ်ရက်မှာပဲအဝတ်တွေလျှော်၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေး တွေလုပ်ရတယ်။ ပြီးရင်သူ့အတွက် စွတ်ပြုတ်ပူပူလေးတစ်ခွက် ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မအတွက်တော့ တစ်နေတာမှာ မမေ့နိုင်တဲ့အရာ သုံးခုရှိတယ်။
ချယ်ရီးခရမ်းချဉ်သီး၊ ရေညှိနဲ့ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်းပဲ။ ကျွန်မအိမ်ရှင်မတစ်ဦးအနေနဲ့တော့ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်မကတော့ထင်တာပဲ။ ကျွန်မတို့နှစ်ဦးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ကောလဟာလတွေကိုကျွန်မတို့နှစ်ဦးအတူဖတ်ပြီးရယ်မောခဲ့ကြတယ်။
Q - ရှင့်အနာဂတ်အတွက်ကော။
A -“လရောင်ဖန်ဆင်း၊နေမင်းကြမ္မာ” စီးရီးကိုတစ်နိုင်ငံလုံး နှစ်သက်အားပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာအဆုံးသတ်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
မင်းသမီးသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအတွက်တော့အများကြီးမပြောင်းလဲသွားပါဘူး။ ကျွန်မနောက်ထပ်ဇာတ်ကားတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ဘဝကိုလဲ အ ခုလိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဖြတ်သန်းသွားမှာပါ။
Ref : news.nate.com
11:40:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
အစ္စလာမ် စာသင်ကျောင်း မီးတုတ်ပစ်မှု ဖြစ်ပွား
11:39:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
မီးတုတ်ပစ်ခံရတဲ့ ဂျာမေ အာရ်ဗီယာ အစ္စလာမ်မီယာသ်လီမွလ်ကုရ်အာန် အထက်တန်း ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း
စက်တင်ဘာလ(၄)ရက်နေ့ ယနေ့ နံနက် ၂ နာရီကျော်လောက်က ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ယုဝလမ်းမှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ် အထက်တန်း ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း (ဓနိမိုး ထရံကာ) မှာ ကျောင်းသား (၄၀)လောက် အိပ်နေတုန်း မီးတုတ်ပစ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
အဆိုပါ ဂျာမေ အာရ်ဗီယာ အစ္စလာမ်မီယာသ်လီမွလ်ကုရ်အာန် အထက်တန်း ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းဝင်း အတွင်းမှာ အဆောက်အဦး နှစ်ခုပေါင်း ကျောင်းသားအားလုံး (၂၀၀)ကျော် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အစ္စာလမ်စာသင်ကျောင်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ဦးသန်းမြင့်က မီးခိုးထွက်တာတွေ့လို့ သွားကြည့်တော့ မီးရှို့ထားတဲ့ အ၀တ်စပတ်ထားတဲ့ သစ်သားချောင်းကို တွေ့ ရတယ်လို့ ကနဦး သတင်းများ အရ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ မီးရှို့ မှုကြောင့် နည်းနည်း ရုတ်ရုတ်သဲသဲတော့ ဖြစ်သွားပေမယ့် အခုတော့ အကြီးအကျယ် မဖြစ်အောင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ က ထိန်းထားနိုင်ပြီးလို့ သိရပါတယ်။
ဆပ်ပြာ၊ရှမ်ပူ တို့က အမျိုးသမီးများ မျိုးအောင်နိုင်မှုကို ထိခိုက်ကြောင်းတွေ့ရှိ(For Girl)
10:20:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
ဥပုသ်ဟူသော စကားလုံးသည် ဥပေါသထဟူသော ပါဠိမှ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပေါသထကို ဥပ + ၀သထ လို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါတယ်။
ဥပ - သူ့အသက် မသတ်ခြင်း ၊ သူ့ပစ္စည်းဥစ္စာမခိုးယူခြင်း စသော အကျင့်ကောင်း အကျင့်မြတ်တို့ကို ပြည့်စုံကောင်းမွန်စွာ ဆောက်တည်ကျင့်သုံးခြင်း။
၀သထ - နေထိုင်ခြင်း လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဥပုသ်စောင့်သုံးပုံအစီအစဉ်ကို ဆရာတော်အရှင်ဇနကဘိဝံသ ရေးသားသော ရတနာဂုဏ်ရည် စာအုပ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။
(၁) မနက်ဖြန်ဥပုသ်စောင့်မည်ဟု ကြံစည်သောသူတော်စင်သည် ဥပုသ်စောင့်သည့်အခိုက်၌ အိမ်မှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ခြင်းငှာ မသင့်သောကြောင့် ယနေ့လိုအခါကပင် အိမ်မှုကိစ္စများကို တာဝန်ရှိသမျှပြီးစီးအောင် စီမံထားရာ၏။
(၂) ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးမည့်သူ အဆင်သင့်ရှိနေလျင် နက်ဖန်မိမိစားဖို့အတွက် ပြောပြစီမံထားရာ၏။ (ဥပုသ်စောင့်သည့်အခိုက် အခါတိုင်းထက်ကောင်းမွန်အောင် စားဖို့ကား မစီမံသင့်ပေ)
(၃) ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးမည့်သူမရှိလျင် နက်ဖန်ကိစ္စနည်းအောင် ပြီးစီးအောင် ၊ စားဖွယ် သောက်ဖွယ်များကို ပြီးစီးအောင်စီမံထားရာ၏။
(၄) နက်ဖန်နံနက်အာရုဏ်တက်ချိန်ကပင် ကိုယ်လက်စင်ကြယ်အောင်ပြု၍ စိတ်ကြည်လင်ရုံမျှ သန့်ရှင်းသောအ၀တ်ကို ၀တ်ဆင်ရာ၏။
(၅) ပန်းပန်မှု ၊ နံ့သာလိမ်းချယ်မှုနှင့် အထူးတလည် ပြင်ဆင်မှုများကို မပြုလုပ်ရာ။
(၆) ထို့နောက် ခပ်စောစော သီလကိုဆောင့်တည်ရာ၏။
(၇) သီလဆောက်တည်ပြီးလျင် ကျွေးမွေးလှုဒါန်းဖွယ်ကိစ္စရှိပါက ပြုလုပ်၍ မရှိပါက မိမိအတွက် သင့်တင့်ရုံသာစီမံ၍ စားသောက်ရာ၏။
(၈) ကျွေးမွေးစားသောက်ပြီးလျင် ကိုယ်လက်မစင်ကြယ်ပါက စင်ကြယ်လာအောင် ရေချိူးရာ၏။
(၉) ထို့နောက် မိမိတစ်ဦးတည်း နေသင့်သူများဖြစ်လျင် တစ်ကိုယ်တည်းနေ၍ အဖော်နှင့်နေသင့်သူဖြစ်က သဘောတူအဖော်နှင့်တကွ သင့်တော်သော ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်၌ ဗြဟ္မ္မဥပုသ်ကိုစောင့်လိုလျင် ဘုရားဂုဏ်တော်ကို အာရုံပြု၍` နေရာ၏။
(၁၀) တာရှည်စွာဆင်ခြင်၍ မနေနိုင်လျင် တရားစာများကို ဖတ်ရှုနေရာ၏။
(၁၁) နည်းလမ်းကျကျ ဟောပြောပြသည့် ပုဂ္ဂ္ဂိုလ်ရှိလျင် တရားနာရာ၏။
(၁၂) အချင်းချင်းလည်းတရားစကား ဆွေးနွေးမေးမြန်းစူးစမ်းရာ၏။
(၁၃) ညဉ့်အချိန်သို့ရောက်သောအခါ မိမိသီလကိုပြန်၍` ဆင်ခြင်ပြီးလျင် အရိယာသူတော်ကောင်း ရဟန္တာ္တအပေါင်းနှင့် ယနေ့အတွက် မိမိတူမျှပုံကို အောက်မေ့ရာ၏။
ဥပုသ်အမျိုးအစား (၆) မျိုး
ဥပုသ်စောင့်ရင်း ဆင်ခြင်နေထိုင်ကျင့်သုံးပုံကို တိကင်္ဂုတ္တရ အဋ္ဌကထာ ၊ ၀ိသာခဥပေါသထသုတ်မှာ ဥပုသ်အမျိုးအစား (၆)မျိုးနဲ့ပြဆိုထားပါတယ်။
(၁) ဗြဟ္မ္မုပေါသထ -
ဗြဟ္မ္မဥပုသ်ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ကာ ဘုရားရှင်၏အရဟံ အစရှိသော ဂုဏ်တော်များကို အဖန်ဖန်ဆင်ခြင်ပွားများ နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၂) ဓမ္မုပေါသထ -
ဓမ္မဥပုသ်ဓမ္မဥပုသ်ဆိုသည်ကား သွာက္ခာတော ဘဂ၀တာ ဓမ္မော အစရှိသော တရားဂုဏ်တော်များကို အဖန်ဖန်ဆင်ခြင်ပွားများနေထိုင်သော ဥပုသ်ဖြစ်သည်။
(၃) သံဃုပေါသထ -
သံဃဥပုသ်သုပ္ပဋိပန္နော ဘဂ၀တော သာဝက သံဃော၊ အစရှိသော သံဃာဂုဏ်တော်များကို ဆင်ခြင်ပွားများရင်ဆောက်တည်သော ဥပုသ်ဖြစ်၏။
(၄) သီလုပေါသထ -
သီလဥပုသ်မိမိဆောက်တည်ထားသောသီလ မကျိုးမပေါက်အောင် မပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်မှု့ကို အဖန်ဖန်နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ပွားများနေထိုင်သောဥပုသ်ကို သီလဥပုသ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
(၅) ဒေ၀တုပေါသထ -
ဒေ၀တာဥပုသ်ဘုန်းရှင် ကံရှင် နတ်ဗြဟ္မ္မာများမှာ ရှေးရှေးဘ၀များက သီလစသောကောင်းမှုတရားများကြောင့် နတ်ဗြဟ္မ္မာများဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။ ငါ့မှာလည်းယခုအခါ သဒ္ဓါ ၊ သီလဂုဏ်စသော ကောင်းမြတ်သောအကျင့်ဂုဏ်တို့ဖြင့် ပြည့်စုံနေပါပေစွ ဟူ၍ နတ်ဗြဟ္မ္မာတို့၏ ရှေးကအကျင့်ဂုဏ်ကို အခြေပြုလျက် နေထိုင်ဆင်ခြင်သုံးသပ်သော ဥပုသ်ကို ဒေ၀တုပေါသထ ဥပုသ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
(၆) အဋ္ဌင်္ဂုပေါသထ -
ရှစ်ပါးသီလအားလုံးကိုဆင်ခြင်သောဥပုသ်ရဟန္တာ္တ အရှင်မြတ်တို့ကား သတ္တ၀ါများအား ၊ နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်း သတ်ဖြတ်မှု မရှိသလို ငါသည်လည်းယနေ့အခါ ထို ရဟန္တာ္တတို့လို နေထိုင်အပ်ပေပြီ.. စသည်ဖြင့်ပါဏာတိပါတမှ စ၍ရှစ်ပါးသီလ သိက္ခာပုဒ်များအားလုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကျင့်သုံးနေထိုင်မှုကို ဆင်ခြင်ပွားများအောက်မေ့ကာ နေထိုင်သောဥပုသ်ကို အဋ္ဌင်္ဂုပေါသထဥပုသ်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။
(၁) ပါဏာတိပါတာ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ ၊ သမာဒိယာမိ။
(၂) အဒိန္နာဒါနာ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ ၊ သမာဒိယာမိ။
(၃) အဗြဟ္မစရိယာ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ ၊ သမာဒိယာမိ။
(၄) မုသာဝါဒါ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ ၊ သမာဒိယာမိ။
(၅) သုရာမေရယ မဇ္ဇပ္ပမာဒဋ္ဌာနာ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ ၊ သမာဒိယာမိ။
(၆) ၀ိကာလဘောဇနာ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ ၊ သမာဒိယာမိ။
(၇) နစ္စ ၊ဂီတ၊ ၀ါဒိတ ၊ ၀ိသုက ၊ ဒဿန ၊ မာလာဂန္ဒ ၊ ၀ိလေပန ၊ ဓာရဏ ၊မဏ္ဍန ၊ ၀ိဘူသနဋ္ဌာနာ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ ၊ သမာဒိယာမိ။
(၈) ဥစ္စာသယန ၊ မဟာသယနာ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ ၊ သမာဒိယာမိ။
(၁) ပါဏာတိပါတာ - သူတပါး၏အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ - ရှောင်ကြဉ်ရာရှောင်ကြဉ်ကြောင်းဖြစ်သော သိက္ခာပုဒ်တော်ကို ၊ သမာဒိယာမိ -ကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။
(၂) အဒိန္နာဒါနာ - အရှင်သည် ကိုယ် ၊နှုတ်ဖြင့် မပေးအပ်သော ၊ သူတပါးဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ - ရှောင်ကြဉ်ရာရှောင်ကြဉ်ကြောင်းဖြစ်သော သိက္ခာပုဒ်တော်ကို ၊ သမာဒိယာမိ -ကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။
(၃) အဗြဟ္မစရိယာ - မမြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းမှ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ - ရှောင်ကြဉ်ရာရှောင်ကြဉ်ကြောင်းဖြစ်သော သိက္ခာပုဒ်တော်ကို ၊ သမာဒိယာမိ -ကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။
(၄) မုသာဝါဒါ - မဟုတ်မမှန်သော စကားကိုပြောဆိုခြင်းမှ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ - ရှောင်ကြဉ်ရာရှောင်ကြဉ်ကြောင်းဖြစ်သော သိက္ခာပုဒ်တော်ကို ၊ သမာဒိယာမိ -ကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။
(၅) သုရာမေရယ မဇ္ဇပ္ပမာဒဋ္ဌာနာ - ကုသိုလ်ကောင်းမှု့၌ မေ့လျော့ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သော ၊ သေရည်သေရက်ကိုသောက်သုံးခြင်းမှ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ - ရှောင်ကြဉ်ရာရှောင်ကြဉ်ကြောင်းဖြစ်သော သိက္ခာပုဒ်တော်ကို ၊ သမာဒိယာမိ -ကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။
(၆) ၀ိကာလဘောဇနာ - နေ့လွဲညစာ စားခြင်းမှ ၊ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ - ရှောင်ကြဉ်ရာရှောင်ကြဉ်ကြောင်းဖြစ်သော သိက္ခာပုဒ်တော်ကို ၊ သမာဒိယာမိ -ကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။
(၇) ၊ နစ္စ ၊ဂီတ၊ ၀ါဒိတ ၊ ၀ိသုက ၊ ဒဿန ၊ မာလာဂန္ဒ ၊ ၀ိလေပန ၊ ဓာရဏ ၊မဏ္ဍန ၊ ၀ိဘူသနဋ္ဌာနာ - ကခြင်း ၊ သီဆိုခြင်း ၊ တီးမှုတ်ခြင်း ၊ တို့ကိုကြည့်ရှု့နားထောင်ခြင်း ၊ ပန်းပန်ခြင်း ၊နံ့သာလိမ်းကျံခြင်း ၊ နံ့သာတို့ဖြင့် ပြေပြစ်အောင်ပြုပြင်ခြင်း၏အကြောင်းမှ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ - ရှောင်ကြဉ်ရာရှောင်ကြဉ်ကြောင်းဖြစ်သော သိက္ခာပုဒ်တော်ကို ၊ သမာဒိယာမိ -ကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။
(၈) ဥစ္စာသယန ၊ မဟာသယနာ - မြင့်သောနေရာ ၊ မြတ်သောနေရာထက်၌နေခြင်းမှ ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ - ရှောင်ကြဉ်ရာရှောင်ကြဉ်ကြောင်းဖြစ်သော သိက္ခာပုဒ်တော်ကို ၊ သမာဒိယာမိ -ကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။
သီလစောင့်ထိန်းခြင်းကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးများပုံကို မဟာဗုဒ္ဒ၀င်ပထမပိုင်း ပါရမီတော်ခန်း သီလပါရမီခန်းမှာ ယခုလိုပြဆိုထားပါတယ်။
(၁) မမေ့မလျော့ခြင်း အပ္ပမာဒတရားအခြေခံရှိသောကြောင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာတိုးပွားခြင်း။
(၂) ကောင်းသတင်း ကျော်ဇော်ခြင်း။
(၃) ပရိသတ်အလယ်ရဲဝံ့တည်ကြည်စွာ ချဉ်းကပ် ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်း။
(၄) သက်တမ်းစေ့နေရကာ မတွေမဝေ ကောင်းမွန်စွာသေရခြင်း။
(၅) သေပြီးနောက် လူ့ပြည် နတ်ပြည် စသောကောင်းရာသုဂတိဘ၀များ ရောက်ရခြင်း စသည့်ကောင်းကျိုးတရား ငါးပါးရရှိစေပါတယ်။
ထိုမျှမက ဥပုသ်စောင့်ထိန်းခြင်း၏ကောင်းကျိုးတရားများပုံကို မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္တိံပြည် ပုဗ္ဗာရုံကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးစဉ် ကျောင်းအမကြီး ၀ိသာခါအား ဤသို့ဟောကြားတော်မူခဲ့၏။
“ ၀ိသာခါ ၊ အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပုသ်ကိုစောင့်သုံးရခြင်းကား အကျိုးအာနိသင်အလွန်ကြီးမားလှ၏။ အဘယ်မျှကြီးမားသနည်းဟူကား… ရတနာအမျိုးမျိုး ပြည့်ဖြိုးကြွယ်ဝသည့် တိုင်းကြီး ၁၆ တိုင်းကိုအစိုးရသော စကြာမင်းကြီး၏စည်းစိမ်သည် ဥပုသ်စောင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အကျိုး၏ ၁၆ စိတ်၊ စိတ်၊ တစ်စိတ်ကိုမျှမမီနိုင်ပေ။တနည်းကား… ၂၅၆ စိတ် စိတ် တစ်စိတ်ကိုမျှ မမှီနိုင်ချေ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဥပုသ်စောင့်ခြင်းကြောင့် ကာမသုဂတိဖြစ်သော နတ်ဘုံ နတ်ချမ်းသာ နတ်စည်းစိမ်ကို အလွယ်တကူပင်ရရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူ့စည်းစိမ်လောက်ကား ဆိုဖွယ်မရှိချေ ”
(နက်ဖန်နံနက်ဝါခေါင်လကွယ် ဥပုသ်နေ့မှာ ဥပုသ်သီတင်းဆောက်တည်ဖို့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းအား နှိုးဆော်အသိပေးအပ်ပါတယ်။ ဖတ်မိ မှတ်မိ လေ့လာမိသမျှ ဗုဒ္ဒ၏အဆုံးအမစကားများအား ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင့်။)
credit Khaing Khaing Win.
မွမ်ဘိုင်းမြို့သည် အမျိုးသမီးများအတွက် လုံခြုံမှုမရှိ
9:47:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
မကြာသေးမီက မွမ်ဘိုင်းမြို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦးအား အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့် မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျူဟီချာဝါလာ အပါအဝင် ဘောလီးဝုဒ်မင်းမီးများက
မွမ် ဘိုင်းမြို့သည်လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိကြောင်းနှင့် ယင်းဖြစ်ရပ်သည် တုန်လှုပ်ချောက်ချား စေကြောင်းဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့သည်။
''အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ မွမ်ဘိုင်းမြို့က လုံခြုံမှုအရှိဆုံးဆိုပြီး ပျော်ပါးမူးယစ်နေ သူတွေကို ဒီဖြစ်ရပ်က လှုပ်နှိုးသတိပေး လိုက်တာပါ။ ဥပဒေပေါ်မှာယုံကြည်မှု မဲ့နေတဲ့အတွက်အဓမ္မမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့
ဥပဒေ သစ်က အရာမရောက်ဘူး။ ဒီတော့ ဒီ ကိစ္စကို အရေးယူဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်နေ ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဒီနိုင်ငံက အမျိုးသမီး တွေကို ဖိနှိပ်မှုက အမြစ်တွယ်နေတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုတွေကို အခွင့်အာဏာတစ်ခုလို သဘောထား တယ်။ အမျိုးသမီးတွေ လွတ်လပ်ခွင့် မရကြဘူး''ဟု ရှာဘာနာအဇမီက စိုးရိမ် ကြီးစွာ ပြောကြားသည်။
မွမ်ဘိုင်းမြို့ကို လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိ သည့်နေရာဟု သတ်မှတ်ထားသည် ဆို သူ ဂျူဟီချာဝါလာက ''ကျွန်မနေတဲ့ မွမ် ဘိုင်းမြို့လေးအတွက် ခုချိန်ထိအောင် အမြဲတမ်း ဂုဏ်ယူနေတာပါ။
လုံခြုံနွေး ထွေးမှုရှိတယ်လို့လည်း ခံစားရတယ်။ အဓမ္မစော်ကားတဲ့ သတင်းတွေကြားရ တော့ တုန်လှုပ်ချောက်ချားမိတယ်။ ဒီ အမျိုးသမီး အမြန်ဆုံး ကျန်းမာပြီး စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူက ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်ဆိုတော့ ကျွန်မ တို့ ရုပ်ရှင်လောကနဲ့လည်း ဆက်သွယ် မှု ရှိနေမှာပဲ။ ဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးက သူနဲ့ သူ့မိသားစုကို ဘယ်လောက်ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းစေမလဲဆိုတာ တွေးကြည့်လို့ တောင် မရပါဘူး။ တအား ဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းတယ်'' ဟု ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် မင်းသမီးချော ရီမာကတ်တီက ''မွမ်ဘိုင်းမြို့တင် မကပါ ဘူး။ အိန္ဒိယရဲ့ ဘယ်နေရာကမှ အလုပ်လုပ်နေသူ အမျိုးသမီးတွေအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး'' ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ဘောဂသိဒ္ဓိရပ်ကွက်(သပြေ-၂) အဆောင်ရှေ့ တောအုပ်အတွင်း တရားမဝင် နေထိုင် လျက်ရှိသော တဲစု၌ ပထွေးဖြစ်သူက မယားပါ သားဖြစ်သူကို ရိုက်နှက်ရာမှ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားကြောင်း သိရ သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိ မြို့နယ် ခုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးမှ ဩဂုတ် ၂၇ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် သေဆုံးသူ အသက် သုံးနှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တွင် မသင်္ကာဖွယ်ရာ ဒဏ်ရာများ တွေ့ရှိ သဖြင့် ဓမ္မတာ အတိုင်း သေဆုံးခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ် လာရောက်စစ်ဆေးပါရန် အမှတ်-၃ နယ်မြေရဲစခန်းသို့ အကြောင်းကြားသဖြင့် စခန်းမှူး ရဲအုပ်ထွန်းထွန်းဦးနှင့်အဖွဲ့သွား ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခြင်း မဟုတ်ကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သို့ဖြစ်၍ သေဆုံးသူမောင်ကောင်း ရာဇာ၏ မိခင် မသန်းသန်းမြင့်(ခ)အငယ်မ ဈေးရောင်းလုပ်ကိုင်သူနှင့် ပထွေးဖြစ်သူ စိုးသူ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီမောင်းနှင်သူတို့အား ခေါ်ယူ စစ်ဆေးရာ ပထွေးဖြစ်သူ ရိုက်နှက် ကိုင်ပေါက်၍ သတိ လစ်မေ့ မြောနေသော ကလေးငယ်အား အပူအပုပ်များပြီး တက်သွားသည်ဟု အကြောင်းပြ၍ ဆေးကုသမှုခံယူရန် ခုတင်(၁၀၀၀) ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်စဉ်လမ်း၌ သေဆုံး မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အဆိုပါသေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မိခင်မသန်းသန်းမြင့်မှ သက်သေ လိမ်လည်ထွက်ဆိုသဖြင့်(အမှတ်-၃) နယ်မြေ ရဲစခန်း၏ သေမှုသေခင်း အမှတ် ၁/၂၀၁၃ အရ စခန်းမှူး ရဲအုပ် ထွန်းထွန်းဦးမှ အမှုလက်ခံ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ပထွေးဖြစ်သူ စိုးသူ၏ဝန်ခံထွက်ဆိုချက်အရလည်းကောင်း၊ မိခင်မသန်းသန်းမြင့်၏ သက်သေအမှန် ထွက်ဆိုချက်အရ လည်းကောင်း ကလေးငယ်မှာ ဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံး ခြင်းမဟုတ်၍ပုဒ်မ ၃၀၂ သို့ ပြောင်း လဲ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
၁-၉-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၄၅ အချိန် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေမာလာရိပ်မွန်ရှိ တရားမ၀င် အနှိပ်ခန်းဖွင့်လှစ်နေကြောင်း သတင်းအရ သက်သေများနှင့်အတူ ၀င်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ထိုသို့စစ်ဆေးရာ ဆိုင်မန်နေဂျာ ရဲဇော်ဦး(၁၉)နှစ်နှင့် ၀ါးခယ်မမြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာနေ ဧည့်ကြို မောင်စန်းထက် (၁၉)နှစ်တို့အားတွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသား ၉ ဦးအား နှိပ်ပေးနေသူ တွံတေးမြို့၊ ပြတသိုက်ကျေးရွာနေ မသော်ဇင်(၁၉)နှစ်ပါ ၉ ဦး၊ နှိပ်ရန်စောင့်နေသူ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ရွှေမာလာရိပ်မွန်နေ အေးမြအောင်(ခ)ပန်းအိ(၁၉)နှစ်ပါ ၆ ဦးနှင့် ကောင်တာစားပွဲ အံဆွဲအတွင်းမှ အနှိပ်သမ အမည်နှင့်ဝင်/ထွက်ချိန်များရေးမှတ်ထားသော ဗလာစာအုပ်(၁)အုပ်၊ ဘော့ပင်(၁)ချောင်း၊ ဂဏန်း ပေါင်းစက်(၁)လုံး၊ ရရှိငွေ(၃၆၃၀၀ိ/-)၊ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားထားသောစာရွက် ၃ ရွက်၊ ခေါင်းအုံး ၇ လုံး၊၊ မွေ့ယာ ၇ ခုတို့အားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သောကြောင့် ရဲဇော်ဦးပါ(၁၇)ဦးအား ကမာရွတ်မြို့မရဲစခန်း ပြစ်မှုပုဒ်မ ၁၈၈ အရ က/ခပုံစံဖြင့် မြို့နယ်တရားရုံးသို့ဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့ရာ ရာကြီးမှုအမှတ် (၄၃၂/၁၃)ဖြင့် လက်ခံစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ အဆင်မပြေတာ ကြုံရတဲ့အခါ ဒေါသဖြစ်ချင်ကြတယ်။
အချို့များမှာ ပုထုဇဉ်ပဲ ဖြစ်မိတာပေါ့ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေလေးနဲ့ ဖြေတက်ကြတယ်။
ပုထုဇဉ်မို့ ဆိုတာလေးပြောရတာ သိပ်ကျေနပ်နေပုံပဲ။
ဘာဖြစ်လို့ ပုထုဇဉ်လို့ ခေါ်တာလဲဆိုတာတော့ ထည့်မစဉ်းစားဘူး။
'ပုထု - ကိလေသာ ဇာနေတီဟိ ပုထုဇ္ဇနေဝ' တဲ့။
♠ ပုထု - ကိလေသာ၊
♠ များပြားလှစွာသော ကိလေသာဆိုးအမျိုးမျိုးတို့ကို။
♠ ဇာနေတိ- ဖြစ်စေတက်၏။
♠ ဣတိတသ္မာ- ထို့ကြောင့်။
♠ ပုထုဇ္ဇနေဝ- ပုထုဇဉ်မည်၏ တဲ့။
ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ လောဘကိလေသာအားကြီးသူ၊ ဒေါသကိလေသာအားကြီးသူ၊ မောဟကိလေသာအားကြီးသူလို့ ဆိုလိုတယ်။
ဒီလူ ကိလေသာအတော်အားကြီးတယ် လို့ ဆိုရင် ရှက်စရာကြီးမဟုတ်လား။
ဒါပေမဲ့ ဒီအဓိပ္ပါယ်ကို မတွေးမိဘဲ ဒါကတော့ ပုထုဇဉ်ကိုးလို့ ပြောရတာတော့ ဟန်ကျတယ် ထင်နေကြတယ်။
တချို့ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမကြီးတွေက တရားစကားလေး ဘာလေးပြောရင် တပည့်တော်တို့ကတော့ ပုထုဇဉ်ကိုးဘုရား၊ဘာညာနဲ့ သူတို့က ဒီအခေါ်လေးနဲ့ ကျေနပ်နေလိုက်ကြတာ။
Hay Man Thaw Dar Nyein တဲ့ view လိုက်ပါ ( အသစ် ကေ...
"We Can't Stop" သီချင်းလေးနဲ့တူ အင်္ဂလိပ်စာလေံလာနိုင...
ယာဉ်အတွင်းထည့်ထားသော ငွေကျပ်သိန်း(၆၀၀)ကျော် တန်ဘို...
Learning English - အင်္ဂလိပ်စကားပြောပိုကောင်းစေရန်နည...
အစ္စလာမ်ဘာသာရေးကျောင်း ဓနိ မိုးပေါ်သို့ မီးတုတ်ပစ်တင...
မကွေးတွင် ဘာသာခြားတစ်ဦးမှ အသက် ၆ နှစ်အရွယ် မိန်းက...
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ဗီဇာသက်တမ်း လေးနှစ်ကုန်ဆုံးသော ...
ဆပ်ပြာ၊ရှမ်ပူ တို့က အမျိုးသမီးများ မျိုးအောင်နိုင်...
မွမ်ဘိုင်းမြို့သည် အမျိုးသမီးများအတွက် လုံခြုံမှုမရ...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နေပြည်တော်သို့ ပြန်ရောက်ပြီ
သတင်းစာ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းများ Download
ပြည်တွင်း အသားစားသုံးသူ ဈေးကွက်အတွင်း ကြက်သား စား...
အဆုတ်ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်သည့် အစားအစာများ
အလုပ်သမားအရေး ဖြေရှင်းရန် မလေးရှားသို့ မြန်မာအထူးက...
မကွေးမြို့ ကုလား-မြန်မာ အဓိကရုဏ်း သတင်း